အိမ်ပေါင် လမ်းညွှန် - YgnHome
အားလုံး English Expats Guide ကွန်ဒို စာချုပ် ဆောင်ရွက်နည်း ဈေးကွက် နိုင်ငံခြားသား ပိုင်ဆိုင်မှု ဗဟုသုတ ဘာသာခြား ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု သေတမ်းစာ အခွန် အမွေ အိမ်ထောင်ဆက်
သတ်မှတ်သီးနှံကို မဖြစ်မနေစိုက်ပျိုးရမယ့် သဘောလား ဆရာ”
“ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဆိုပါ လယ်ယာမြေကို အခြားနည်း သုံးစွဲခွင့်ပြုပါဆိုပြီး သက်ဆိုင်ရာ စီမံ ခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ထံ လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်”
“ခွင့်ပြုချက်ရမှ အကွက်ရိုက် ရောင်းချတာမျိုး လုပ်နိုင်မှာပေါ့ ဆရာ”
ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အမှုတွေမှာ နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းပြီးခွဲဝေတဲ့အပေါ် တရားရုံးက အတည်ပြုချမှတ်ပေးတဲ့ အမိန့်ဒီကရီဖြစ်တယ်”
“တချို့ကပြောတော့ ဥပဒေအတိုင်းရပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ အချိုးအစားမဟုတ်ဘဲ နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းလို့ရရှိတဲဲ့ အချိုးအစား ဝေစုဖြစ်လို့ တရားမဝင်ဘူးဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား”
မြို့သစ်စီမံကိန်းဟုဆိုကာ အကွက်ရိုက်ရောင်းချနေသော လယ်ယာမြေကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
“မြို့သစ်စီမံကိန်းထဲပါမယ့် မြေနေရာတွေဆိုပြီး၊ လယ်ယာမြေတွေကို ကွန်ကရစ်လမ်းတွေခင်း၊ ခြံဝန်းတွေ ခတ်ပြီး ရောင်းနေတယ်ဆရာ၊ အဲဒါတရားဝင်ပါသလား။ ပြီးတော့ မကြာမီ ကာလက ပြဋ္ဌာန်းတဲ့ လယ်ယာမြေ ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေထွက် ထားတယ်လို့ ကြားတယ် ဆရာ၊ အဲဒီ မြေကွက်ကိုဝယ်ရင် အဆင်ပြေပါ့မ လားလို့ ဆရာ့ဆီလာပြီး တိုင်ပင်တာပါ”
ပါမစ်မြေက တော့ အမွေဆက်ခံသူအဖြစ် အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်း စာချုပ် မြွက်ဟကြေညာပြုလုပ်ခွင့်မရှိပါဘူး”
“ဒါဆိုရင် မိသားစုဓာတ်ပုံမှာ ပါဝင်သူတွေက ပါမစ်မြေမှာ အမွေဆက်ခံခွင့် မရှိဘူးလား ဆရာ”
အမွေပုံပစ္စည်းဖြစ်လာတတ်သည့် မိဘများမကွယ်လွန်ခင်ပေးကမ်းခဲ့သော အိမ်နှင့်မြေကိုဝယ်မည်ဆိုလျှင်
“ပေးကမ်းခြင်းစာချုပ်မှာကျန်တဲ့ သားသမီးနှစ်ဦးကလည်း သဘောတူကြောင်း ဖော်ပြထားမယ်။ ဒါမှ မဟုတ် အသိသက်သေအဖြစ် လက်မှတ်ရေးထိုးထားမယ်ဆိုရင်တော့ ကျန်တဲ့သားသမီးနှစ်ဦးက မိဘကွယ်လွန်ချိန်မှာ ကန့်ကွက်ဖို့ ခက်ခဲသွားနိုင်တာပေါ့”
မြေပိုင်ရှင် ကွယ်လွန်သွားသဖြင့် ကျန်ရစ်သူထံမှ ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာရယူ၍ ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
“ကိုယ်စားလှယ်စာဆိုတာက ကိုယ်စားလှယ်စာပေးသူကိုယ်စား လက်မှတ်ရေးထိုးပိုင်ခွင့်၊ တရားရုံး အပါအဝင် အစိုးရရုံးအသီးသီးမှာ ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာပေးသူ ကိုယ်စားသွားရောက်ပိုင်ခွင့်၊ ပြောပိုင်ခွင့်၊ အရေးဆိုပိုင်ခွင့် တွေကို ဆောင်ရွက် ခွင့် ပေးထားတာဖြစ်တယ်” “ဒါဆိုရင် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ ရရုံနဲ့ အဲဒီမြေကွက်ပိုင်ရှင်ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးပေါ့”
မိဘများက သားသမီးအမည်ဖြင့် ဝယ်ထားသည့် အိမ်နှင့်မြေကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
“ဒီကန့်ကွက်စာအရတော့ မူလက မိဘတွေဝယ်ထားတဲ့ အိမ်နဲ့ မြေလို့ ဆိုတယ်။ အိမ်ဟောင်းကိုပြင်ပြီး မိဘတွေက နှစ်ထပ်တိုက် ဆောက်လိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် မြေကွက် အမည်မပြောင်းခဲ့ဘူး။ မိခင်က မူလ ပိုင်ရှင်ထံက ကိုယ်စားလှယ်စာယူထားတယ်။ ဖခင်ကွယ်လွန်သွားတော့ မိခင်က သားသမီးတွေကို အရောင်း စာချုပ် ချုပ်ဆိုရောင်းတယ်။ ဂရန်အမည်ကို သားသမီး သုံးဦး အမည် ဖောက်တယ်။
“အစောကပြောသလို ဘိုးဘွား ပိုင်မြေတွေကို ခွဲစိတ်ရောင်းချလွှဲ ပြောင်းပေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ ရောင်းမည့်သူနဲ့ မြေကွက်အမည်ပေါက်က တစ်ဦးတည်းလား၊ ဒါမှမဟုတ် မြေကွက်အမည်ပေါက်နဲ့ ဘယ်လိုဆက် စပ်မှုရှိသလဲဆိုတာ သေချာစုံစမ်းသိ ရှိဖို့ လိုတယ်”
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အခွန်ကောက် ဥပဒေကြမ်းနှင့် အိမ်ခြံမြေ စျေးကွက် လှိုင်းဂယက်
၂၀၂၀ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု အခွန်အကောက် ဥပဒေကြမ်းရဲ့ ပုဒ်မ – ၂၅ မှာ အသုံး ပြုသည့် ဝင်ငွေမှ ဝင်ငွေရလမ်းတင် ပြနိုင်သည့်ဝင်ငွေရှိပါက ယင်းဝင်ငွေ အားနုတ်ပယ်ပြီး ကျန်စည်းကြပ်မှုမှ ကင်းလွတ်နေသော ဝင်ငွေပေါ်တွင် လည်းကောင်း၊ ဝင်ငွေရလမ်းမတင်ပြနိုင်ပါက အသုံးပြုသည့် ဝင်ငွေပေါ် တွင်လည်းကောင်း ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ဝင်ငွေခွန်စည်းကြပ်ရမယ်လို့ ဖော်ပြ ထားပါတယ်”
လယ်ယာမြေကို အားလုံးဖြစ်စေ၊ တစ်စိတ် တစ်ပိုင်းဖြစ်စေ၊ လယ်ယာမြေ၏ လုပ် ပိုင်ခွင့်ကို ရောင်းချခြင်းဖြစ်တယ်။ မြေကွက်ကို ရောင်းချခြင်းမဟုတ်ဘူး။ လယ်ယာမြေဥပဒေပုဒ်မ – (၁၂) မှာ လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ရောင်းချ၊ ပေါင်နှံ၊ ငှားရမ်း၊ လွှဲပြောင်း၊ လဲလှယ်ပေးကမ်းခြင်းပြုရာမှာ ကြေး တိုင်နှင့် မြေစာရင်း ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ထား
ပြန်လည်စိစစ်ရန် လိုအပ်နေပြီဖြစ်သော ရန်ကုန်မြို့ရှိ တိုက်အိုတိုက်ဟောင်းများ
အဆောက်အအုံမှာ နေထိုင်သူတွေက စုပေါင်းပြီး မြို့တော်စည်ပင်သာယာ ရေးကော်မတီထံ တင်ပြရင်တော့ လာရောက်စိစစ်ပြီး အန္တရယ်ရှိ အဆောက်အအုံအဆင့်ရောက်ရှိခြင်း ရှိ မရှိ အကြီးစားပြင်ဆင်မှုအဖြစ်ပုံစံ မပျက်ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုသင့် မပြုသင့် စိစစ်ညွှန်ကြားနိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်” “တကယ်လို့ နေထိုင်သူတွေက စိစစ်ပေးဖို့ သက်ဆိုင်ရာမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီကို တင်ပြ ခြင်းမရှိဘူး။ လူမညီခဲ့ဘူးဆိုရင် ဘယ်လို ဆောင်ရွက်လို့ရမလဲ”
လူနေထိုင်ခွင့်မရသေးသည့် တိုက်တွင် ငှားရမ်းနေထိုင်ခဲ့လျှင်
စတင်ဆောက် လုပ်ခွင့်ပါမစ်ရစဉ်က ဘယ်ကာလ အတွင်း ဥပမာ – ၈ လအတွင်း၊ ၁၂ လအတွင်း စသည်ဖြင့်ပြီးစီးအောင် ဆောက်လုပ်ပါမယ်လို့ မြို့တော်စည် ပင်သာယာရေး ကော်မတီအဆောက် အအုံ ဌာနမှာ ဝန်ခံလက်မှတ်ထိုးကြ ရပါတယ်”
ဝယ်ထားသည့် ဥယျာဉ်ခြံမြေနှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားမှု တရားစွဲဆိုမည်ဆိုလျှင်
“ပုံစံ(၇) ထုတ်ပေးထားတဲ့ မြေကွက်ဖြစ်တဲ့အတွက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် လယ်ယာမြေဥပဒေအရ လယ်ယာ မြေအမျိုးအစားမှာပါဝင်တဲ့ ဥယျာဉ် ခြံမြေ ဖြစ်နေတယ်”“ပုံစံ (၇) ဆိုတာက ဘာကိုပြောတာလဲ”“ပုံစံ (၇) စာရွက်စာတမ်းက လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ခွင့်ပြုတဲ့ လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့် လက်မှတ် ဖြစ်တယ်”
“အပြစ်ဒဏ်ပိုင်းက ဘယ်လို သတ်မှတ်ထားပါသလဲ”“ပြစ်ဒဏ်ပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ ပထမအကြိမ် ကျူးလွန်လျှင် ငွေဒဏ် ကျပ် (၁) သိန်းမှ ကျပ် (၅) သိန်း အထိ ချမှတ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဆက်လက်ကျူးလွန်ပါက ထောင်ဒဏ် သုံးလအထိ ချမှတ်ရမည်လို့ ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်”
“တစ်ခါတစ်ရံမှာ အပေါင်စာချုပ်အဖြစ် မချုပ်ဆိုဘဲ အိမ်မြေကို အရောင်းစာချုပ်အဖြစ် ချုပ်ဆိုတာ မျိုးရှိတတ် တယ် မဟုတ်လား”
“ဥပဒေအရ ပြောရရင်တော့ ဟန်ဆောင်စာချုပ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။
တိုက်ခန်းကို ဘဏ်နှင့်ချိတ်၍ အရစ်ကျဝယ်မည်ဆိုလျှင်
“ဒါဆိုရင် အပေါင်ခံထားတဲ့ သဘောပေါ့”
“မှန်ပါတယ်။ မိမိဝယ်ယူထားတဲ့ တိုက်ခန်းကို သက်ဆိုင်ရာဘဏ်မှာ အပေါင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်”
“သတ်မှတ်တဲ့ရက်အတွင်း ပြန်မဆပ်နိုင်ရင် ဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်ပါသလဲ”
တရားရုံးမှ လေလံတင် ရောင်းချမည့် အိမ်ခြံမြေသည် အမွေဆိုင် ဖြစ်နေလျှင်
“အိမ်ထောင်ကျတာ နှစ်နှစ်နီးပါးရှိပြီ ဆရာ။ အမေ မကွယ်လွန်မီ လေးလခန့်က ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ အမေ ကွယ်လွန်ပြီးပေမယ့် ကျွန်မတို့ မောင်နှမအကြီး နှစ်ယောက်က ဘာမှမပြောတော့ အဲဒီတိုက်ခန်းမှာပဲ ဆက်နေ ခွင့်ရထားတယ်” “ကဲ – ဆက်ပြောပါဦး။ အကြွေး ငွေတွေက ဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲ”
သတိပြုသင့်သည့် အိမ်ခြံမြေ အဝယ်ထပ်ခြင်း
“မြေနှင့် အခွန်စည်းကြပ်ရေး ဥပဒေအရ အစိုးရက ဂရန်ထုတ်ပေးထားခြင်း မရှိသေးသော အစိုးရပိုင် မြေပေါ် တွင် နေထိုင်သူသည် အမွေဆက်ခံခွင့် လွှဲပြောင်းပိုင်ခွင့်မရှိ။ အစိုးရက ဂရန်ထုတ်ပေးပြီးမှသာ ထိုမြေနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အမွေဆက်ခံခွင့် လွှဲပြောင်းပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်” “ဒါဆိုရင် ပါမစ်မြေတွေက အမွေဆက်ခံခွင့်မရဘူးဆိုတဲ့ သဘောလား ဆရာ”
ကြိုပွိုင့်ဝယ်ထားသည့် တိုက်ခန်းများကို ကန်ထရိုက်တာမှ ဆက်လက်မဆောက်နိုင်လျှင်
ကန်ထရိုက်တာ ကုမ္ပဏီက ဆက်လက်မဆောက်ရင် ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်သလဲ ဆရာ။ ကန်ထရိုက်တာနဲ့ မြေရှင်တို့ရဲ့ သဘောတူကတိစာချုပ်အရ သက်တမ်းကုန်သွားလို့ လုပ်ငန်းဖြတ်တောက် ကြောင်း သတင်းစာထဲမှာ ကြေညာတာတွေဖတ်နေရတယ် ဆရာ။ အဲဒါမျိုးဆိုရင်ဘယ်လိုဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရပါသလဲ”
Maintenance Fees / စုပေါင်းကျခံရမည့် ကန်ထရိုက်တိုက် အဆောက်အအုံ ပြင်ဆင်စရိတ်စနစ်
“ဟုတ်ပါတယ် ဆရာ။ အချို့က ပြောတော့ ခိုင်ခိုင်မာမာ ဆောက်လုပ် ခြင်းမပြုရဘူးလို့ ပြောကြတယ်”
“မှန်ပါတယ်။ နံရံကို ဖောက်ပြီး ခိုင်ခိုင်မာမာထပ်ခိုးဖွဲ့တာမျိုး၊ အုတ်နံရံ ကာရံထားပြီး မူလဖွဲ့ထားတဲ့ အခန်းကို ဖျက်ပစ်တာမျိုး မလုပ်ရဘူး။ မြေရှင်က သဘောမတူရင် တရားစွဲဆိုပိုင်ခွင့်ရှိလာနိုင်တယ်”
ကွယ်လွန်သွားသည့် ပူးတွဲပိုင်ရှင်နှင့် ဆက်စပ်နေသော အိမ်နှင့်မြေကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
“ဒါဆို ပူးတွဲပိုင်ရှင် ကွယ်လွန်ရင် ကျန်ပူးတွဲပိုင်ရှင်က ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိ နိုင်တဲ့ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက် မရှိဘူးလား ဆရာ”
“ရှိပါတယ်။ ပူးတွဲပိုင်ရှင်က မိမိပိုင် ပူးတွဲဝေစုကို ပူးတွဲပိုင်ရှင်အား စွန့်လွှတ်ကြောင်း စွန့်လွှတ်စာချုပ် ချုပ်ဆိုပေး သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်”
“သက်ရှိထင်ရှားရှိနေစဉ် ပြုလုပ် သွားရမှာလား ဆရာ”
ပူးတွဲပိုင်ရှင်ရှိသည့် တိုက်ခန်းကို ဝယ်မိလျှင်
“မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေအရ ကျန်ရစ်တဲ့ ပစ္စည်းဟာ မိရင်း ဖရင်း လက်ထက်က ပစ္စည်းဖြစ်ခဲ့ရင် လင်ပါ မယားပါ သားသမီးက ပစ္စည်းရဲ့ လေးပုံသုံးပုံရရှိပြီး မိထွေး ပထွေးက ပစ္စည်းရဲ့ လေးပုံတစ်ပုံရခွင့်ရှိမှာ ဖြစ် တယ်။ ဒါပေမယ့်…
ဝရမ်းထုတ်ထားသည့် အိမ်ကို ဝယ်မိလျှင်
“အမွေခွဲဝေလိုမှု၊ ပစ္စည်းလက် ရောက်ရလိုမှုတွေမှာ အမှုရှုံးလို့ ပစ္စည်းခွဲဝေပေးရတာမျိုး။ မိမိနေထိုင် တဲ့ အိမ်က ဆင်းပေးရတာမျိုးကျတော့ ငွေကြေးပေးဆပ်လိုက်တာနဲ့ ဖြေရှင်းလို့ရတဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ဘူး”
“အခုကိစ္စကတော့ ငွေမပေးဆပ် နိုင်လို့ အိမ်ကို ဝရမ်းကပ်တယ်လို့ ပြောပါတယ် ဆရာ”
ပေးကမ်းခြင်း စာချုပ်ဖြင့် အမွေခွဲဝေပေးထားသည့် အိမ်နှင့်မြေကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
“ပေးကမ်းခြင်းစာချုပ်ထဲမှာ ပေးကမ်းသူ၏ သဘောတူညီချက်မရဘဲ အသက်ထင်ရှားရှိနေစဉ် ပေးကမ်း ထားသည့် ပ္စည်းကို လွှဲပြောင်းရောင်းချခြင်း မပြုရ။ ပြုလုပ်ပါက ပေးကမ်းခြင်း ပျက်ပြယ်တယ်လို့ အတိ အကျဖော်ပြသဘောတူချုပ်ဆိုထားရင်တော့ ပေးကမ်းသူ မိခင်မကွယ်လွန်မီမှာ ရောင်းချခွင့်ရှိမှာ မဟုတ်ပါ ဘူး”
ဒီလို ရောင်းဝယ်နေကြသည့် တန်ဖိုးနည်း တန်ဖိုးသင့် အိမ်ရာ တိုက်ခန်းများ
တိုက်ခန်းရောင်းချခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အဆိုပါ နေထိုင်ခွင့်စာအုပ်တွင် တိုက်ခန်းရောင်းချမည်ဆိုပါက ရန်ကုန် မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ (အင်ဂျင်နီယာဌာန) သို့ အကြောင်းကြားပြီး ပူးတွဲပါ အရောင်း အဝယ် စာချုပ်တွင် ဖြည့်စွက်ကာ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရမည်ဟုပါရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။
Myanmar Condominium Law
Myanmar Condominium Law The Condominium Law Pyidaungsu Hluttaw Law No. 24, 2016 (29th January 2016) The Pyidaungsu Hluttaw hereby enacts this law. Chapter (1) Title and definitions 1. This Law shall be called the Condominium Law. 2. The following expressions contained in this law shall have the meanings given hereunder- (a) Condominium meansabuilding […]
မယ်သီလများ အမွေရခွင့် ရှိပါသလား
“ဟုတ်ပါတယ် ဆရာ။ သီလရှင်ဝတ်သွားတာ ကိုးဝါနီးပါးရှိပြီလို့ သိရတယ်။ သူ့ဖခင်ဆုံးပြီး တစ်နှစ်လောက် အကြာမှာ သီလရှင်ဝတ်သွားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ လူဝတ်အဖြစ် ပြန်ထွက်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘဲ ကန့်ကွက်တာ လို့ သိရတယ်”
“ဒုတိယ ဇနီးကွယ်လွန်သွားတာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ”
“နှစ်နှစ်ခန့်ရှိပြီ ပြောပါတယ်။ မြေကွက်အမည်ပေါက်မှာတော့ ဒုတိယ ဇနီးအမည်နဲ့ တွဲဖက်ထားတာဖြစ်တယ်”
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရမှ စီမံခန့်ခွဲသည့် မြေကွက်များကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
“ဟုတ်တယ် ဆရာ၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ဗြဟ်္မစိုရ်လမ်းနဲ့ သီလလမ်းထောင့်မှာရှိတဲ့ အရှေ့ပိုင်း ခရိုင်စုပေါင်း ရုံးမှာ ဆရာ၊ ညအိပ်တန်းစီစောင့်သူတွေရှိတယ်”
“လျှောက်လွှာတစ်စောင်ကို ငွေကျပ်တစ်သောင်းနဲ့ဝယ်ရတာ မဟုတ်လား”
“ဟုတ်ပါတယ် ဆရာ၊ အောက်တိုဘာ ၇ ရက်နေ့ကစပြီး ရောင်းတာပါ။ နံနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၃ နာရီ အထိ ရောင်းပေးတော့အချိန်နည်းသလားလို့”
ကွဲကွာနေသော လင်မယားနှစ်ဦးပိုင် တိုက်ခန်းကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
“လက်မထပ်မီက လင်ယောကျ်ားက ဝယ်ထားတဲ့ တိုက်ခန်းလား”
“ဟုတ်တယ် ဆရာ၊ ဒါကြောင့် သူက ရောင်းလို့ မရဘူးလား”
“ဥပဒေအရတော့ တရားဝင်မကွာရှင်းရသေးတဲ့အတွက် လက်ထက်ပွားပစ္စည်းမဟုတ်ပေမယ့် လင်ယောကျ်ား ကပါလာတဲ့ ပါရင်းပစ္စည်းအဖြစ်တော့ ရှိနေတာပေါ့”
အမွေသည် စုန်ရမည်ဖြစ်၍ အမွေရခွင့် မရှိသူက အိမ်မြေကို မရောင်းနိုင်ခြင်း
“စာချုပ်စာတမ်းနဲ့ ကိတ္ထိမမွေးစားတာတော့ မလုပ်ဖြစ်ဘူး ထင်တယ်။ သူ့ယောကျ်ားရှိတော့အားနာပြီး မလုပ်တာ ဖြစ်မယ်”
“နောက်ပိုင်းလည်း မလုပ်ဖြစ်ဘူးထင်တယ်။ မဟုတ်လား”
“သားကို သေချာမေးကြည့်မှ သိမယ် ဆရာ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သားသမီး မကျန်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ မောင်နှမသား ချင်းက အမွေရတယ် မဟုတ်လား”
အိမ် ခြံ မြေ ပူးတွဲပိုင်ရှင်တို့ကသာ စွန့်လွှတ်စာချုပ် ချုပ်ဆိုနိုင်ခြင်း
“ခြေရင်းဘက်က ပေ ၂၀ x ပေ ၆၀ မြေပေါ်ရှိ အိမ်ကို ဝယ်မယ်လို့ စိတ်ကူးထားတာပါ”
“မြေကွက်ကို တရားဝင်ခွဲစိတ်ထားတာမဟုတ်ဘဲ မိမိတို့ သဘောအတိုင်း ခွဲစိတ်ပြီး အဆင့်ဆင့်ရောင်းထားတဲ့ မြေကွက်ဖြစ်နေတတ်တယ်”
“ခွဲစိတ်ထားတဲ့ ဂရန်မြေလားမေးတော့ မဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ပြီးတော့ ဂရန်မူရင်းက ခေါင်းရင်းအိမ်မှာနေတဲ့ သူ့အစ်မလက်ထဲမှာလို့ သိရတယ်”
အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် မြေ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ လျှောက်ထားမှုများ
“ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး နယ်နိမိတ်မှာ ၃၃ မြို့နယ်အနက် ၂၁ မြို့နယ်မှာ Online စနစ်နဲ့ မြေယာကိ္စတွေကို လျှောက်ထားနိုင်တယ်လို့ သိရတယ်။ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ မြေစီ မံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ ကြည့်လို့ရတယ်”
သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် နှင့် အိမ်ငှားတို့၏ အခွင့်အရေး
အပျောက်ငွေပေး စနစ်ဖြင့် ငှားရမ်းနေထိုင်သည့် အ ဆောက်အအုံ ပျက်စီးသွားပါက အပျောက်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူထား သော တိုက်ခန်းပိုင်ရှင်တို့သည် မူ လမြေကွက်ပေါ်တွင် စုပေါင်းငွေ စိုက်ထုတ်၍ အဆောက်အအုံ သစ်ဆောက်လုပ်ခွင့်ရှိပေသည်။
သို့သော် အခြားသော စနစ်ဖြင့် ငှားရမ်းနေထိုင်သူတို့မှာ မိမိငှားရမ်း နေထိုင်သော အဆောက်အအုံ ပျက်စီးပြိုကျ မီး လောင်သွား ခဲ့သော် အပျောက် စနစ်ဖြင့် ငှားရမ်းနေထိုင်သူတို့ ကဲ့ သို့ အခွင့်အရေးရရှိမည် မဟုတ်ပေ။
အပေါင်ထားသည့် အိမ်မြေကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
“ပစ္စည်းပေါင်တယ်ဆိုတာ နှစ်မျိုးရှိတယ်၊ အခုလက်ရှိ အခြေအနေက ဘယ်လိုအခြေအ နေလဲ၊ အပြင်ပုဂ္ဂိုလ်ထံ ပေါင်တာလား၊ ဘဏ် မှာပေါင်တာလား”
“ဒါတော့ သေချာမသိ သေးဘူး၊ အပြင်က လူတစ်ယောက်ထံ ပေါင်တာထင်တာပဲ၊ ငွေချေတာနဲ့ ပေါင်ထားတဲ့ ဂရန် စာချုပ်ကို ရွေး ပြီးပေး မယ် ပြော တာပဲ”
အခွန်အကောက်ဥပဒေကြမ်းနှင့် လှုပ်ရှားလာနိုင်သည့် အိမ် ခြံ မြေ စျေးကွက်
“ဥပဒေကြမ်းပါ နှုန်းထားများအရဆိုရင်တော့ ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်းကျော် လျှော့ချလိုက်တယ်လို့ တွေရတယ်။ ယခင် နှုန်းထားမှာက ဝင်ငွေကျပ် ၁ မှ ကျပ်သိန်း ၃ဝဝ အထိကို ၁၅ ရာ ခိုင်နှုန်း။ ကျပ်သိန်း ၃ဝ၁ မှ ကျပ် သိန်း ၁ဝဝဝ အထိကို ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်း။ ကျပ်သိန်းတစ်ထောင်တစ်ကျပ် မှ အထက်ကို ၃ဝ ရာခိုင်နှုန်း ဝင်ငွေပေါ်မှ ကောက်ခံ မှာဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအခွန်အကောက် ဥပဒေကြမ်းအရ ….
မိဘက သားသမီးတစ်ဦးဦးကို ကြိုတင်အမွေခွဲဝေပြီး ကျန်သည့် အိမ် မြေကို ရောင်းမည်ဆိုလျှင်
“အဖေဖြစ်သူက ဦးစွာကွယ်လွန်ခဲ့တာ မဟုတ်လား”
“ဟုတ်ပါတယ် ဆရာ။ အစ်ကိုကြီးက ကင်ဆာရောဂါဖြစ်တော့ အမေ့ဆီကနေ အမွေကြိုတောင်းတာ ဆရာ။ ဥပဒေအရလည်း သားအကြီး ဖြစ်လို့ ကြိုတင်ရပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ ပြောတာပဲ ဆရာ”
“ဖခင်ကွယ်လွန်သွားပြီး အကြီးဆုံးက သားဖြစ်ရင် သြရသသားအဖြစ် ဥပဒေအရ ကြိုတင်အမွေတောင်း ခွင့်ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်”
အိမ်ခြံမြေတိုက်ခန်း ရောင်းဝယ်ခြင်းနှင့် အခွန်ကောက် ဥပဒေ
အိမ်မြေ၊ တိုက်ခန်း ဝယ်ယူရာတွင် သုံးစွဲသည့် ငွေကြေးပမာဏမှာ ယခင်က အိမ်မြေ တိုက်ခန်း မော်တော် ကား စသဖြင့် ခိုင်မာသည့် ပစ္စည်း ရောင်းချခဲ့စဉ် အခွန်စည်းကြပ် ထားပြီးဖြစ်သော ဝင်ငွေ သို့မဟုတ် အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုခုဖြင့် ဥပမာ- ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုခုဖြင့် ရရှိထားသောဝင်ငွေအပေါ်အခွန်စည်းကြပ်ထားပြီး ဖြစ်သည့် ဝင်ငွေ ပမာဏ အောက် လျော့ နည်းနေပါက ထပ်မံအခွန် ထမ်းဆောင်ရန် မလိုအပ်တော့ဘဲ အခွန်စည်းကြပ်ခြင်းမှ ကင်းလွတ် ခွင့်ရမည်ဖြစ်သည်။
အိမ်ခြံမြေ တိုက်ခန်း ငှားရမ်းခြင်း နှင့် အခွန်ကောက် ဥပဒေ
ဝင်ငွေခွန်အနေဖြင့်မြေ၊ အဆောက်အအုံ တိုက်ခန်းတို့ကို ငှားရမ်းခြင်းမှ “ဝင်ငွေရရှိသူ (မြေရှင် သို့မဟုတ် အိမ်ရှင်) သည် တစ်နှစ် အတွင်း ရရှိသည့် ငှားရမ်းခငွေအပေါ် သက်သာခွင့်များနုတ် ပယ်ပြီး ကျန်ငွေမှာ ငွေကျပ်သိန်း နှစ်ဆယ်ထက်ပိုပါက ပိုငွေ အပေါ် ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်း ဝင်ငွေခွန် ထမ်း ဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း…
လယ်ယာ ဥယျာဉ် ခြံမြေများ ရောင်းချပိုင်ခွင့်
ယခင်ပြဋ္ဌာန်းထားသော ၁၉၅၃ ခုနှစ် လယ်မြေ နိုင်ငံပိုင် ပြုလုပ်ရေး အက်ဥပဒေအရ လယ် သမားများ လယ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိ သော် လည်း ယင်းဥပဒေ ပုဒ်မ -၄ အရ လယ်ယာမြေကို ရောင်း ဝယ်ခြင်းလွှဲပြောင်းခြင်းမပြုရဟု ပိတ်ပင်ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
သို့သော်ယခင် လယ်ယာ မြေဥပဒေများကို ရုပ်သိမ်းပြီး အသစ်ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည့် ၂ဝ၁၂ ခု နှစ် လယ်ယာမြေဥပဒေတွင် လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် အပါအ ဝင် လယ်ယာမြေများကို ရောင်း ဝယ်လွှဲပြောင်းခွင့် ရရှိလာပေ သည်။
စရန်ငွေပေး ကတိစာချုပ်၏ အဓိကကျမှု
စရန်ပေး ကတိစာချုပ်ပါ အချိန်နေ့ရက် အပါအဝင် စည်းကမ်းချက် တစ်ခုခုကို ဖောက်ဖျက်ခဲ့ပါလျှင် ဝယ်သူအနေဖြင့် စရန် ငွေ ဆုံးရှုံး သည့်အပြင် တစ်ခါတစ်ရံ စရန်ငွေပေးပြီး လက်ရောက်ရ ယူထားမှုကိုပါ ဆုံးရှုံးသွားတတ်သဖြင့် ဝယ်သူများအနေဖြင့် စရန် ပေးကတိ စာချုပ်ကို အထူးဂရုပြု ချုပ်ဆိုသင့်ကြောင်း
စရန်ငွေ ပေးချေခြင်းနှင့် ဥပဒေပါ အခွင့်အရေး
အိမ်ခြံမြေ တိုက်ခန်းအားဝယ်ရာတွင် စရန် ငွေပေးချေပြီး ပစ္စည်းကို ရောင်းသူက အခြားသူအား ထပ်မံရောင်းချပါက၊ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့်အညီရာဇာဝတ်ကြောင်းအရ တရားစွဲဆိုနိုင်သည့်အပြင် စရန်ငွေပေး ကတိစာချုပ်ပါ အတိုင်း လျော်ကြေး ရရှိရန် တရားမကြောင်းဖြင့် လည်း တရားစွဲဆိုနိုင်ကြောင်
အိမ်ခြံမြေ တိုက်ခန်း ဝယ်ယူသူတို့၏ ဥပဒေပါ အခွင့်အရေး
အိမ်၊ ခြံ၊ မြေတိုက်ခန်းစသည်ဖြင့် ပစ္စည်းများ ရောင်းဝယ်ရာတွင် ဝယ်ယူအနေဖြင့် အဖိုးစားနားပေးပြီး ပစ္စည်းကို လက် ဝယ်ရရှိ ထားပါက ရောင်းသူအနေ ဖြင့် ဝယ်သူအားနှင်ပိုင်ခွင့်ရှိမည် မဟုတ်ပေ။ သို့သော်စရန်ငွေပေး ကတိစာချုပ်ပါ အချက် များကို ဖောက် ဖျက်လျှင်မူ ယင်းကတိစာ ချုပ်အရ ကတိပျက်ကွက်မှု အပေါ်တရားစွဲဆိုခံရမည်ဖြစ် သည်။
အိမ်ခြံမြေ ဝယ်ယူသူတို့ ငွေပေးချေခြင်းဆိုင်ရာ အခွင့်အရေး
ဥပဒေအရ အတိအကျပြောရရင် မှတ်ပုံတင်အရောင်းအဝယ် စာ ချုပ် မပြုလုပ်မီအချိန်မှာ ဝယ်သူအနေနဲ့ အိမ်မြေကို တရားဝင်လွှဲ ပြောင်းပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အတွက် ရောင်းသူက ကျန်ငွေကို တောင်း ပိုင်ခွင့်ရှိမှာ မဟုတ်သေးဘူး၊ မှတ်ပုံတင်အရောင်းအဝယ် စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး တရားဝင်လွှဲ ပြောင်းပေးပြီးမှ ကျန်ငွေကို ရပိုင် ခွင့်ရှိမှာဖြစ် ပါတယ်”
အိမ်ခြံမြေ ဝယ်ယူသူများ ဆုံး ရှုံးနိုင်သည့် ဖြစ်ရပ်
“ငါ့မှာ နယ်တာဝန်ကျစဉ် က မြေကွက်တစ်ကွက် အစိုးရချ ပေးလို့ရထားတာရှိတယ်၊ အိမ် လည်း ဆောက်ပြီးနေခဲ့တယ်ပေါ့ ကွာ၊ ငါရန်ကုန်ပြောင်းလာတော့ အဲဒီအိမ်ကို အိမ်ငှားထားခဲ့တယ်၊ အခုအဲဒီအိမ်ငှားက ငါပိုင်တဲ့အိမ် ကို သူ့အိမ်လို့ဆိုပြီး ရောင်းစားပစ်ခဲ့တယ်”
“ဟေ ရောင်းစားလိုက်တာ ကြာပြီလား၊ ရောင်းစားတဲ့ အိမ်ငှား တွေက ဘယ်ရောက်သွားလဲ”
ပိုင်ရှင် အငှားထံမှ ဝယ်ယူမိခြင်း
မိဘများက ငွေစိုက် ထုတ်၍ သားသမီးအမည်ဖြင့် အမည်ငှားအဖြစ် မှတ်ပုံတင်အ ရောင်းအဝယ်စာချုပ် ချုပ်ဆိုဝယ် ထားခြင်း၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုး ကြောင့် မောင်နှမသားချင်းအတွင်း အမွေမခွဲဝေနိုင်မီတစ်ဦးတစ် ယောက်အမည်ဖြင့် အရောင်းအ ဝယ်မှတ်ပုံတင် စာချုပ်-ချုပ်ဆို ဝယ်ထားခြင်းများရှိတတ်ပေသည်။
အိမ်ငှားထားရှိသော အဆောက်အအုံကို ဝယ်လျှင်
အိမ်ငှားသက်တမ်း ကုန်သော် လည်း ဆင်းမပေးဘဲ ဆက်လက် နေထိုင်သဖြင့် တရားစွဲဆိုရသည့် အခြေအနေမျိုးလည်းရှိတတ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဝယ်ယူစဉ်က အ ဆောက်အအုံ တိုက်ခန်းသည် အ ခန်းလွတ်မဟုတ်ဘဲ အိမ်ငှားများ ရှိ နေပါက အဆိုပါ အိမ်ငှားများနှင့် ဝယ်ယူလိုက်သူတို့ အိမ်ရှင်အိမ် ငှား သီးခြား စာချုပ် ချုပ်ဆိုရမည် ဖြစ်သည်။
တိုက်ခန်းဝယ်ယူခြင်းနှင့် အမည်ပြောင်းခ တိုက်ခန်းအရောင်းအဝယ် ပျောက်ငွေပေးစနစ်
အပျောက်စနစ် ဖြင့် တိုက်ခန်းများအား လွှဲပြောင်း ရောင်းချခြင်းသည် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို လွှဲပြောင်းခြင်းမဟုတ်ဘဲ နေထိုင် ပိုင်ခွင့်ကို လွှဲပြောင်းရောင်းချသည့် သဘောပင်ဖြစ်သည်။
အိမ်ခြံမြေ တိုက်ခန်းအား နှုတ်ကတိဖြင့် ဝယ်ယူခြင်းကို အတည်ပြုနိုင်ခြင်း
“ယောက်ဖကွယ်လွန်သွားတာ နှစ်လလောက်ရှိပြီ။ မိန်းမက တော့ သူ့ယောက်မကို အားနာလို့ ဘာမှမပြောဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့် အခြားတစ်ယောက်ကို အိမ်နဲ့ မြေ ရောင်းထားတယ်လို့ ကြားတယ်၊ အဲဒါဘယ်လို ဆောင်ရွက်ရင် ကောင်းမလဲဆိုတာ သူငယ်ချင်းဆီ အကြံလာတောင်းတာပဲ”
မြေကို ခွဲစိတ်ခွင့် မရသော်လည်း မှတ်ပုံတင် အရောင်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ခြင်း
ခွဲ စိတ်ပြီး မြေကွက်ဧရိယာဟာ အ နည်းဆုံး စတုရန်းပေ ၁၂ဝဝရှိရပါမယ်။ ပြီးတော့ ခွဲစိတ်ပြီးတဲ့ မြေ ကွက် အားလုံးမှာ ဝင်ထွက်သွားလာ နိုင်တဲ့ လမ်းရှိရမှာဖြစ်တယ်။ ဒါ ကြောင့် မျက်နှာစာဘက် ၁ဝ ပေရှိ တဲ့ မြေကွက်ကိုတော့ ခွဲစိတ်ပေးမှာ မဟုတ်ဘူး”
ပါမစ်မြေ ဝယ်ယူခြင်း ဆိုင်ရာ သိမှတ်ဖွယ်ရာ
မြေချပါမစ် (အိမ်ရာ ဆောက်လုပ်နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်)တွင် အိမ်ရာမြေကွက်ရသူသည် မြေကွက်ကို ခွဲစိတ်ခြင်း၊ တစ်ဆင့် လွှဲပြောင်း ရောင်း ချ၊ ပေါင်နှံ၊ ပေး ကမ်းခြင်း လုံးဝမပြုရဟု ဖော်ပြ ထားပါသည်။
ဝယ်ယူထားသည့်တိုက်ခန်း လက်ရောက်မရမီ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ထားမိခြင်း
“ပြီးခဲ့တဲ့ လဆန်းပိုင်းက တိုက်ခန်းတစ်ခန်းကို အပျောက် စနစ်နဲ့ ဝယ်ထားလိုက်တယ်။ ငွေ လည်းအကြေချေထားတယ်။ တိုက် ခန်းရောင်းသူမိသားစုက ဝါတွင်း ကာလမို့ တစ်လလောက်နေခွင့်ပြု ပါလို့ တောင်းဆိုတယ်”
“ဒီတော့ နေခွင့်ပေးလိုက် တယ်ပေါ့”
“အေး-ငါကလည်း ရိုးရိုး သားသားပဲထင်ပြီး တစ်လအတွက် လခလည်းမယူ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ ထား လိုက်မိတယ်”
ရောင်းသူ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် နေသူရှိသည့် အိမ်တိုက်ခန်းအား ဝယ်ခြင်း
မူလကတော့ အိမ်၊ တိုက် ခန်းရောင်းမည်ဆိုလျှင် ချက်ခြင်း ဆင်းပေးပါမည်ဟု ကတိပြုကြ သော်လည်း အမှန်တကယ် အ ရောင်း အဝယ်ဖြစ်သည့်အခါ ရွှေ့ ပြောင်းရန်နေရာ အခက်အခဲရှိနေ ၍ တစ်လ၊ နှစ်လခန့် နေထိုင်ခွင့် ပြုပါဟု တောင်းဆိုသည့် ကိစ္စရပ် များ မကြာခဏဖြစ်လေ့ရှိပါသည်။
မှတ်ပုံတင် ပြုလုပ်ချုပ်ဆိုရမည့် အိမ်၊ တိုက်ခန်း အငှားစာချုပ်များ
တစ်နှစ်ကာလအထိ ချုပ်ဆိုထားသော နှစ်ချုပ်ငှားရမ်းခြင်း ကတိစာချုပ်များ သည် စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင် ရုံးတွင် မှတ်ပုံ မတင်သော်လည်း စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင် အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၈ ပိုင်ခွဲ (ဂ)အရ ပြဋ္ဌာန်းဥပဒေနှင့် ညီညွတ်သော ကတိစာချုပ် များဖြစ်ကြောင်း တွေ့ ရှိရပေသည်။
တစ်သက်တာ အခမဲ့နေထိုင်ခွင့်နှင့် စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင် ဥပဒေ
မရွှေ့မပြောင်း နိုင်သည့် ပစ္စည်းအပေါ် ပိုင်ရှင်၏ ခွင့်ပြုချက်အရ နေထိုင်သူမှာ ပိုင်ဆိုင်ခွင့် လုံးဝရှိသူမဟုတ်၍ ပိုင်ရှင်က ကြည်ဖြူသလောက်သာ ထိုပစ္စည်းပေါ် ၌ နေထိုင်ခွင့်ရှိ သည်။ ပိုင်ရှင်အနေဖြင့် ၄င်း၏ ခွင့်ပြုချက်ကို အချိန်မရွေး ရပ်စဲ နိုင်သည်။
သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်နှင့် မြေငှားနေသူတို့၏ အခွင့်အရေး
အဓိက အချက်ကတော့ မြေငှားတဲ့ ကာလနှစ်ပြည့်သွားတဲ့အခါ အဲဒီ အဆောက်အအုံရဲ့ စီမံခန့်ခွဲခွင့် အစစအရာရာဟာ မြေပိုင်ရှင် က ခံစားခွင့်ရမှာပဲဖြစ်တယ်။ ဆောက်လုပ်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်က ခံစားခွင့်လုံးဝမရှိတော့ဘဲ လွှဲ ပြောင်းပေးလိုက်ရတဲ့ သဘော ဖြစ်တယ်”
အပျောက်စနစ်တိုက်ခန်းများတွင် မြေရှင်အား အိမ်လခပေးရုံဖြင့် အိမ်ငှား ဖြစ်မလာခြင်း
“သူငယ်ချင်းတို့ တိုက်ခန်း ဝယ်စဉ်က စာရွက် စာတမ်း တွေ မစစ်ဆေးကြည့်ဘူးလား”
“စစ်တော့ စစ်ဆေးတယ်လို့ ဇနီးသည်က ပြောတာပဲ၊ အိမ်ပွဲစားနဲ့ သေချာစစ်တယ်လို့ ပြောတယ်၊ ဇနီးသည် ပြောတာတော့ မြေရှင်ထံမှာ အိမ်လခ ဖြတ်ပိုင်းကို ရောင်းသူအမည်နဲ့ ပေးထားတယ် ပြောတယ်” ဟု ပြောရင်း သူငယ်ချင်းက အိမ်လခ ဖြတ်ပိုင်း တစ်ခု ကို ပြပါသည်။
စရန်ငွေပေးရုံဖြင့် ထပ်မံလွှဲပြောင်း ရောင်းချခွင့် ရှိ၊ မရှိ
မြေ ရောင်းတဲ့သူက ရှေ့ဘက်က ပေ ၂ဝx ပေ ၆ဝ မှာ အိမ်ဆောက် ထားပြီးနေတယ်။ မြေရောင်းတဲ့သူ အပြောကတော့ မြေပိုင်ရှင်ကို စရန်ငွေပေးပြီးသား ကျန်ငွေကို အခု ငါ့တူကိုရောင်းလို့ရတဲ့ငွေနဲ့ အပြီးချေမယ်ပြောတော့ ယုံပြီး ဝယ်လိုက်တာပေါ့။ မကြာဘူး။ မြေပိုင်ရှင်ဆိုတဲ့ သူကရောက်လာပြီး၊
မွေးစားသားသမီးထံမှ အိမ်နှင့်မြေ ဝယ်လျှင်
ဂရန်အမည်ပေါက်က ကွယ်လွန်သွားတာကြာပြီ။ သူ့ဇနီးကလည်း သေဆုံးသွားတာ မကြာ သေးဘူး။ သူတို့မှာ မွေးစားသမီး တစ်ဦး ရှိတယ်။ သားသမီးအရင်း မရှိဘူး ပြောတယ်။ အဲဒီ မွေးစားသမီးဆီက မြေနဲ့အိမ်ကိုဝယ်ရင် အမည် ပေါက်ရနိုင်သလား
အိမ်မြေဝယ်လျှင်အထူး သတိပြုရမည့် စာရွက်စာတမ်း အတုများ
“မြေခွန်ပြေစာအတုတွေပေါ်နေတာ ဆိုလားပဲ”ဟု မိတ်ဆွေက ပြောပြန်သည်။
“အတုကတော့ မြေခွန်ပြေ စာတစ်ခုတည်း မဟုတ်ဘူး။ မြေချ ပါမစ်အတု၊ မြေဂရန်အတုတွေ လည်းရှိတာပဲ”
“သားကြီးကို မိခင်က မှတ်ပုံတင်စာချုပ်နဲ့ ပေးကမ်းခဲ့ရင် သား ငယ်က တောင်းပိုင်ခွင့်ရှိပါဦးမလား”
စာချုပ်စာတမ်းများကို အာမခံထား၍ ပေါင်နှံကြရာတွင် ပစ္စည်းကို လက်ရောက်ပေးရန် မလိုအပ်ပေ။ ရွေးနုတ်ခွင့်ကို ပိတ်ပင်ခွင့်မရှိချေ။ ထူးခြားချက်မှာ စာချုပ်စာတမ်းပေးအပ်ပေါင်နှံခြင်း တွင် အပေါင်စာချုပ်ကို စာချုပ်စာ တမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံး၌ မှတ်ပုံတင်ရန် မလိုအပ်ပေ။ အပေါင်ကတိစာချုပ် ဖြင့် တရားဝင်ဆောင်ရွက်နိုင် သည်။
စရန်ငွေ ပေးထားရုံနှင့် အရောင်းအဝယ် အတည်မဖြစ်ခြင်း
“သူငယ်ချင်းပြောစကားအရ တော့ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ငွေ အပြီး ချေဖို့ ကိုယ့်ဘက်က ပျက် ကွက်တာတော့ ရှိနေတယ်”
“စရန်ငွေပေးပြီးသားပဲကွာ၊ တို့နေပိုင်ခွင့်ရှိနေတာပဲ မဟုတ်လား၊ တချို့ဆို စရန်ငွေပေးထားပြီး တခြားလူကို ရောင်းစား ပစ်တာတွေ ရှိတာပဲ၊ တို့က အလွဲသုံးစားလုပ် တာမှ မဟုတ်ဘဲ၊ မှန်မှန်ကန်ကန် ငွေပေးချေမှာပဲလေ”
တရားရှုံးထံမှ အိမ်မြေတိုက်ခန်း ဝယ်ယူလျှင်
“အင်း-ကိုယ်က တိုက်ခန်းကို ကြိုက်နေတော့ မြေရှင်နဲ့ သွားမညှိကြတော့ပဲ အလွယ်တကူ ဝယ် ကြတာတွေ ဖြစ်ကုန်တာပေါ့၊ အမှန်က တိုက်ခန်းကို ဝယ်မယ်ဆို ရင် မြေရှင်နဲ့ အိမ်ရှင်အိမ်ငှား သဘောတူ ငှားရမ်းခပေးရတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုရင် နေပိုင်ခွင့် အတွက် အမည်ပြောင်းဆောင် ရွက်ကြရတယ်”
ကိုယ်စား လှယ်စာလွှဲထားခဲ့သူက ပိုင်ရှင်မသိဘဲ ရောင်းစားလိုက်သည်များလည်း ရှိပေသည်။ ထိုအခြေအနေမျိုး၌ ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူက ကိုယ်စားလှယ် စာရသူအပေါ် နစ်နာကြေး၊ လျော် ကြေးတောင်းပိုင်ခွင့်ရှိပေသည်။ ပစ္စည်းဝယ်ယူအပေါ်ကိုမူ တရားစွဲ ဆို တောင်းပိုင်ခွင့် ရှိ မည်မဟုတ် ပေ။
တရားခံပြေးပိုင် မြေနှင့် အိမ်ကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
“ယေဘုယျအားဖြင့် ပြောရရင်တော့ ဆုံးရှုံးနိုင်တယ်လို့ ပြောရမှာပဲ၊ ဒါပေမယ့် ဝရမ်းမစွဲကပ်မီ တရားဝင်ဝယ်ထားတာ ဆိုရင်တော့ ဝယ် ထား သူက ခုခံပိုင်ခွင့်ရှိ မှာဖြစ်တယ်”
“ဒါဆိုရင် တရားခံပြေး အ မည်ပေါက်မြေနဲ့ အိမ်ကို ဝယ်ထား သူထံကနေ ထပ်ဆင့်ဝယ်မယ်ဆို ရင်တော့ ကင်းလွတ်တဲ့ သဘော ပေါ့”
အရွယ်မရောက်သေးသည့် သားသမီးများ၏ မြေနှင့် အိမ်ကို ဝယ်လျှင်
မိဘဖြစ်သည့်တိုင် အရွယ်မ ရောက်သေးသူပိုင်ပစ္စည်းကို ထုခွဲ ရောင်းချလိုရင်တော့ အမွေဆက်ခံ ခြင်း အက်ဥပဒေအရ အုပ်ထိန်းခွင့်လက်မှတ်ကို တရားရုံးမှာ လျှောက်ထားရတယ်။ အုပ်ထိန်းခွင့်လက်မှတ်ရသူက…
ဘာသာမတူ မွေးစားသားသမီးများထံမှ အိမ်ခြံမြေ ဝယ်ယူပိုင်ခွင့်
“ကွယ်လွန်သွားတဲ့ ဂရန်အမည်ပေါက်အဘွားကြီးက ဗုဒ္ဓဘာ သာဝင်ဖြစ်နေတော့ အစ္စလမ်ဘာ သာဝင်က အမွေရနိုင်ပါ့မလား”
“ဟုတ်တယ်။ မှန်တယ်၊ မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်း ဥပဒေအရ၊ ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင် မိဘရဲ့ အမွေဆက်ခံ ခွင့်ဟာ ဘာသာခြားသားသမီးဆီ မရောက်နိုင်ဘူးပေါ့။
အိမ်မြေ တိုက်ခန်း အဝယ်ထပ်ရာတွင် စရန်ငွေနှင့် ငွေအကြေပေးချေခြင်းတို့ ကွာခြားမှု
“စရန်ငွေပေးထားတဲ့ လူပြောတာက သူသက်သေလိုက်ပေးမယ်။ ကန်ထရိုက်ကို လိမ်လည်ရောင်းတယ်လို့ တရားစွဲ ပြီးတော့ လျော် ကြေး လည်း တောင်းလို့ ပြောတာပဲ။အဲ-သူကတော့ ကျွန်တော့်ထက် စောပြီး ဝယ်ထားတာမို့ ဥပဒေအရ သူက တိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်လို့ ပြောတယ်။ အဲဒါဟုတ်ပါသလား
မိမိပိုင် အိမ်နှင့် မြေအဖြစ် ရောင်းချပြီးမှ မပိုင်ဟု ငြင်းဆိုခွင့် မရှိခြင်း
“သားနှစ်ယောက်လုံးက သူတို့ ပိုင်တာဆိုပြီး လက်မှတ်ထိုးတယ်၊ သူတို့ရဲ့ မိန်းမတွေက အသိသက် သေအဖြစ် လက်မှတ်ထိုးတယ်၊ မိခင်ကြီးကတော့ နာမကျန်းဖြစ်ပြီး အိပ်ရာထဲလဲနေသူဆိုတော့ လက်မှတ်မထိုးခဲ့ဘူး။ အခု အဘွားကြီး ဆုံးတော့…
“အဲ-ဟိုတလောက ရန်ကုန် မင်္ဂလာစျေးကြီး မီးလောင်တယ် မဟုတ်လား၊ ဆိုင်ရှင်တွေကို နိုင်ငံ တော်က ထောက်ပံ့ကြေးတွေ ထုတ်ပေးနေတယ်လေ။ အေး-တစ် ခုတော့ရှိတာပေါ့။ သဘာဝ ဘေး အန်္တရာယ်ဆိုတာ ရေ၊ မီး၊ မြေပြို မယ်၊ မြေငလျင်ဒဏ် ခံရမယ် စတဲ့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ငှားရမ်းခ နှင့် မြို့ပြဆိုင်ရာငှားရမ်းခ ကြီးကြပ်ရေးဝန်ရုံး
“မြို့နယ်မြို့ပြဆိုင်ရာ ငှားရမ်း ခကြီးကြပ်ရေး ဝန်ရုံးဆိုတာ ငှားရမ်းတဲ့ ဥပစာအဆောက်အအုံရှိတဲ့ မြို့နယ် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး မှူးရုံးပဲဖြစ်တယ်”။ ဥပမာ-အခု ငှားရမ်းနေထိုင်တဲ့ အဆောက်အ အုံဟာ စမ်းချောင်းမြို့နယ်မှာရှိရင် စမ်းချောင်းမြို့နယ် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှာ လျှောက် ထားရမှာဖြစ်တယ်”
သေတမ်းစာ ရေးပြီး ပေးသွားသည့် မြေနှင့် အိမ်ကို ဝယ်လျှင်
“အမွေဆက်ခံခြင်း ဥပဒေအ ရ သေတမ်းစာမှာပါတဲ့ အမွေရသူ က သေတမ်းစာပူးတွဲပါရှိသော အမွေထိန်းစာကို သက်ဆိုင်ရာ တရားရုံးမှာ သေတမ်းစာကို တင်ပြ ပြီး လျှောက်ထားရယူရမှာဖြစ် တယ်”
“သေတမ်းစာပူးတွဲပါရှိတဲ့ အမွေထိန်းစာရသူက အမွေပစ္စည်း အားလုံးကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရသွားပြီ လား ဆရာ”
ရွာမြေ၊ ဥယျာဉ် ခြံမြေတို့ကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
ဥယျာဉ်ခြံမြေတွေက လယ်ယာမြေ ထဲမှာ ပါဝင်ပြီး လူနေရပ်ကွက်အ တွင်းမှာရှိတဲ့ မြေ၊ ရွာမြေတွေက တော့ လယ်ယာမြေ အမျိုးအစား ထဲမှာ မပါဝင်ဘူး သူငယ်ချင်း”
“လယ်ယာမြေကို အရောင်း အဝယ်လုပ်လို့ မရဘူးဆိုပြီး သိ ထားတယ်။ အဲဒါက ဘယ်လိုအ ခြေအနေလဲ”
ပထမအိမ်ထောင်မှ သားသမီးများအား အမွေခွဲမပေးရသေးသည့် မြေနှင့်အိမ်ကို ဝယ်လျှင်
“ဥပဒေအရဆိုရင်တော့ မြန် မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်းအရ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဝင်တွေဟာ နှုတ်အားဖြင့်လည်း ပစ္စည်းလက်ရောက်ပေးပြီး အမွေခွဲ လို့ရတာပဲ၊ ဒါပေမယ့် မိသားစုစီမံမှုစာချုပ် ချုပ်ဆိုပြီး အမွေခွဲဝေကြ ရင်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့”
“စာချုပ်စာတမ်းမရှိခဲ့ဘူးဆို ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဆရာ”
အရောင်းအဝယ်ကတိစာချုပ်နှင့် တံဆိပ်ခေါင်း အက်ဥပဒေ
“တိုက်ခန်းအရောင်းအဝယ် ကတိစာချုပ်တစ်ခုတည်း မဟုတ် ဘူး။ ချုပ်ဆိုတဲ့ စာချုပ်အားလုံးမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ တံဆိပ်ခေါင်း ခွန် တန်ဖိုးကို ထမ်းဆောင်ရ တယ်။ မပြည့်မီဘူးဆိုရင်တော့ တရားရုံးမှာ သက်သေခံအဖြစ် အ သုံးမပြုနိုင်ဘူး။ စာချုပ်တရားမ ဝင်ဘူးလို့လည်း ကန့်ကွက်နိုင် တယ်”
“သီးခြားအိမ်ခန်းတစ်ခုချင်း အဖြစ် ဖွဲ့စည်းကာရံထားတာဖြစ် လို့ မိမိပိုင်ဆိုင်နေထိုင်ရာ အိမ်ခန်း ကို လွှဲပြောင်းရောင်းချခွင့်ရမှာဖြစ် တယ်၊ တစ်ခုသတိပြုရမှာကတော့ မြေရှင်နဲ့ ဘယ်လိုသဘောတူညီ ချက်ရယူထားတယ်ဆိုတာတော့ စုံစမ်းပြီးမှ ဝယ်သင့်တယ်၊
၁၂ နှစ်ကျော် နေထိုင်လာသူထံမှ မြေနှင့်အိမ်ကို ဝယ်လျှင်
“အိမ်မြေပိုင်ရှင်ရဲ့ တရားစွဲ ဆိုမှုက ကာလစည်းကမ်းသတ် ၁၂ နှစ်ကျော်သွားလို့ တရားစွဲတာ ရှုံး သွားတယ်ပြောတယ်”
“သူတို့က အနိုင်ရတယ်ပေါ့၊ ၁၂ နှစ်ကျော်လို့ ပိုင်ရှင်ကို ဆန့် ကျင်နေထိုင်ခွင့် ရသွားတာဖြစ် မယ်”
“ဟုတ်တယ် ဆရာ၊ အခုသူ တို့က အိမ်နဲ့ မြေကို ရောင်းမှာ ဆရာ”
မိသားစုပုံစံဖြင့် ပေးထားသော အိမ်မြေတိုက်ခန်းကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
“သားနဲ့ ချွေးမကို မိခင်က ခွင့် ပြုချက်နဲ့ထားတဲ့ သဘောဖြစ်နေတာပေါ့။ တိုက်ခန်းရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုက မိခင်လက်ဝယ်မှာ ရှိနေသေး တယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ မိခင်ကို အသိပေး ပြီးမှ ရောင်းသင့်တယ်လို့ ဆရာ ထင်တယ်။ ဝယ်လိုက်ပြီး ပိုင်ဆိုင် ခွင့် အမည်ပြောင်းမယ် ဆိုရင် မိခင် ရဲ့ သဘောတူညီချက်ယူမှ တိုက် ခန်းအမည်ပေါက်ကို တရားဝင်ရ မှာဖြစ်တယ်”
မြို့ပြဆိုင်ရာ ငှားရမ်းခကြီးကြပ် ရေး အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၃ ပုဒ်မခွဲ (၁) အရ၊ စံငှားရမ်းခ သတ်မှတ် ပေး ပြီး ဆက်လက်နေထိုင်ခွင့် ပြု ထားတဲ့ တိုက်ခန်းဆိုရင် တိုက်ခန်း နေသူက တိုက်ခန်းကို ရောင်းချလွှဲ ပြောင်းခွင့် မရှိဘူးဆိုတဲ့ သဘော ပေါ့နော်”
“အခွန်အကောက် ဥပဒေ အရတော့ နိုင်ငံသားမည်သူမဆို အခြေပစ္စည်းတစ်ရပ်ရပ်ကို ဝယ်ယူခြင်း၊ လွှဲပြောင်းရယူခြင်းပြုတဲ့အခါ အသုံးပြုတဲ့ ဝင်ငွေဟာ ဝင်ငွေရ လမ်း မဖော်ပြနိုင်ရင် အစောက ပြောခဲ့သလို ဝယ်ခွန်နှုန်းထားအ တိုင်း အခွန်ပေးဆောင်ရမှာဖြစ် တယ်”
“ဥပဒေနဲ့ အညီတရားဝင် အ ရောင်းအဝယ်အဆင့်မဟုတ်သေး ဘူး။
စွန့်လွှတ်စာချုပ်ဖြင့် ပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟု ဆိုသူထံမှ အိမ်နှင့်မြေကို ဝယ်လျှင်
“အင်း ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ မှာ စွန့်လွှတ်စာချုပ်အတွက် မပါ ဘူး ထင်တယ်ဆရာ၊ အရောင်းအ ဝယ် ကိစ္စတစ်ခုတည်းလို့ပဲ ဖတ် လိုက်မိတယ်”
“ဒါဆိုရင်တော့ စွန့်လွှတ် စာချုပ်မှာ ညီဖြစ်သူက အစ်ကိုကြီး ကိုယ်စား လက်မှတ်ရေးထိုးခွင့်မရှိ ဘူးပေါ့ကွယ်”
“ဒီလိုဆိုရင် စွန့်လွှတ် စာချုပ် က တရားမဝင်တော့ဘူးပေါ့နော်”
ဦးစွာဝယ်ပိုင်ခွင့် ရှိသူထံမှ အိမ်မြေတိုက်ခန်း ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
“စျေးပေါလို့ ဖြစ်မှာပေါ့၊ ဒီလိုပဲ အကျိုးအမြတ်ရှိမယ်လို့ ယူဆပြီး အမှုကို ဝယ်ယူတဲ့သူတွေ ရှိကြ တယ်”
“မင်းပြောသလို အမှုကို ဝယ် ယူတယ်ပဲထားပါတော့။ အခုအမှု နိုင်တဲ့ သူက တိုက်ခန်းတန်ဖိုးကို မအမ်းနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဒါ ကြောင့်သူ့ဝေစုကိုပဲ ကြိုရောင်းရ မလားဆိုပြီး ငါ့မိတ်ဆွေဆီဝယ်ဖို့ ပြောတာပဲ”
ငှားရမ်းထားသည့် အဆောက်အအုံကို အိမ်ရှင်မှ သဘောရိုးဖြင့် ရယူလိုလျှင်
မြို့ပြဆိုင်ရာ ငှားရမ်းခကြီးကြပ် ရေး အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၂ (၁)(စ) အရ ငှားရမ်းထားတဲ့ အဆောက် အအုံကို ပိုင်ရှင်က အကြောင်းအား လျော်စွာ ရိုးဖြောင့်သော သဘော ဖြင့် အိမ်ရှင်ကိုယ်တိုင်နေထိုင်ရန် ကိစ္စအတွက် သက်သက်ရယူလိုပြီး ကိုယ်တိုင်နေထိုင်မယ်ဆိုရင် အိမ် ငှားကို ဖယ်ရှားပိုင်ခွင့်၊ နှင်ပိုင်ခွင့် ရှိတယ်လို့ ပြဋ္ဌာန်းထားတယ်”
အပေးစာချုပ်ဖြင့် ပေးကမ်းသော်လည်း လက်ရောက်ရယူခြင်း မရှိသူထံမှ အိမ်နှင့် မြေကို ဝယ်လျှင်
“သမီးနားမလည်တာက အဘွားက သမီးအတွက် သူပိုင်မြေနဲ့ အိမ်ကို မှတ်ပုံတင် အပေးစာချုပ် ချုပ်ဆိုထားပေမယ့် သမီးက အဘွား နဲ့အတူမနေလို့ အပေးစာချုပ်ပျက် ပြယ်သွားပြီ၊ မပိုင်ဆိုင်ဘူးလို့ ပြော တယ်ဆရာ၊ အဲဒါဟုတ် ပါသလား။ သိချင်ပါတယ် ဆရာ။ ပြီးတော့ သူ တို့က အဲဒီမြေနဲ့ အိမ်မှာနေတာ အနှစ် ၂ဝ နီးပါးရှိလို့ သူတို့ ပိုင် သွားပြီလည်း ပြောပါတယ်”
ကျူးကျော်နေထိုင်သူရှိသည့် မြေနှင့်အိမ်ကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
“အစကတော့ အိမ်ငှားဆိုပြီး ဝယ်လိုက်တာ၊ နောက်တော့မူလ အိမ်ငှားမဟုတ်တော့ဘဲ၊ နောက်တစ်ဦး အခုနေတဲ့သူက အခန်းကို ဝယ်နေတာလို့ သိရတယ်”
“ဟုတ်ပြီ၊ မူလအိမ်ငှားက အပျာက်သဘော အိမ်ရှင်မသိဘဲ ရောင်းလိုက်တဲ့ သဘောပေါ့၊ ဒါဆို အခုနေတဲ့ သူက အိမ်ငှားမဟုတ် တော့ဘူး ဖြစ်နေပြီ”
မြေရှင်ထံ ပြန်လည် လွှဲပြောင်းပေးထားသော ပြည်သူပိုင်သိမ်း တိုက်ခန်းကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
“အိုးအိမ်ဦးစီးဌာနက နေထိုင် ခွင့်ပြုထားတဲ့ တိုက်ခန်းဆိုရင် တော့ လွှဲပြောင်းရောင်းချပိုင်ခွင့်မရှိ ဘူး။ မဝယ်တာ အကောင်းဆုံးပဲ”
“မြေပိုင်ရှင်ကို ပြန်ပေးထား တဲ့ အခန်းလို့လည်း ပြောတယ်”
“ဟုတ်တယ်။ ပြည်သူပိုင် သိမ်းထားတယ်ဆိုတဲ့ အဆောက် အအုံတစ်ခုလုံးကို ဖြစ်စေ၊ တိုက် ခန်းကိုဖြစ်စေ၊ ပိုင်ရှင်ကို ပြန်လည် ပေးအပ်ထားတာတွေလည်း ရှိ တယ်”
မခွဲစိတ်ရသေးသည့် မြေနှင့် အိမ်ကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
“ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီရဲ့ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းအရကျင့်သုံးဆောင်ရွက် နေတာကတော့ ခွဲစိတ်ပြီးတဲ့ မြေ ကွက်အတိုင်းအတာဟာ မျက်နှာ စာဘက်မှာ အနည်းဆုံး ပေ ၂ဝ ရှိရမှာဖြစ်ပြီး အနည်းဆုံး စတုရန်း ပေ ၁၂ဝဝ ရှိရမှာဖြစ်တယ်။
ကွာရှင်းပြီး မိဘတို့၏ သားသမီးများထံမှ အိမ်မြေ တိုက်ခန်း ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
“မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်း ဥပဒေအရ ပြောရရင် လင်မယား တရားဝင်ကွာရှင်းပြီးနောက် အဖေ ရဲ့ အိုးအိမ်နဲ့ အမိရဲ့ အိုးအိမ် ဆိုပြီး နှစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာမယ်။ အဖနဲ့အ တူလိုက်သွားတဲ့ သားသမီးဟာ အဖထံက အမွေကိုသာရခွင့်ရှိ တယ်။ အမိထံက အမွေကို ဆက်ခံ ခွင့်မရှိဘူး။
မျက်မြင်အတိုင်း အိမ်နှင့်မြေကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
“အိမ်ဝယ်စဉ်က မြေကို တိုင်း မကြည့်ခဲ့မိဘူး။ အခု ကန်ထရိုက် တိုက်ဆောက်မယ်လုပ်တော့မှ မြေ အကျယ် ပေ ၂ဝ x ပေ ၆ဝ မှာ ပေ ၂ဝ မပြည့်ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒါ ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရင်ရမလဲ”
“မြေငှားစာချုပ် ဂရန်မှာ တော့ မြေကွက်အကျယ်ကို ပေ ၂ဝ ပေ ၆ဝ လို့ ဖော်ပြထားမှာပေါ့”
ကွန်ဒို အဆောက်အအုံဟောင်းများနှင့် နိုင်ငံခြားသားများ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်
“ငါက နိုင်ငံခြားသားဖြစ်သွား တော့ တိုက်ခန်းဝယ်လို့ မရပြန် ဘူး။ ဒါကြောင့် ငါ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အမည်နဲ့ပဲ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်း တစ်ခန်းကို ပြီးခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်လောက် က ဝယ်ထားခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီ သူငယ်ချင်းကိုပဲ အိမ်ငှား အဖြစ် နေထိုင်စေခဲ့တယ်။ အခု ကွန်ဒို ဥပဒေအရ နိုင်ငံခြားသား တွေဝယ်ခွင့်ရှိပြီဆိုတော့ ငါ့အမည် ကို လွှဲပြောင်းယူလို့ရမလား”
သိထားသင့်သည့် စံငှားရမ်းခ သတ်မှတ်မှု
“ငှားရမ်းထားတဲ့ အဆောက် အအုံမှာ ထပ်ဆင့်ပြီး အငှားချထား လို့ အိမ်လခတိုးတောင်းတဲ့ ကိစ္စ တွေ၊ စပေါ်ငွေရယူပြီး ငှားရမ်းထား တဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာ အိမ်လခတိုး တောင်းတဲ့ ကိစ္စတွေ၊ အဆောက် အအုံကို ပြင်ပေးရတဲ့အတွက် ကုန် ကျစရိတ်ကြောင့် ငှားရမ်းခ တိုး တောင်းတာတွေစတဲ့အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် အိမ်ရှင်က အိမ် လခတိုးတောင်းတဲ့ဆိုတဲ့အခါ….
“တစ်နှစ်ကာလအထိ ငှား ရမ်းစာချုပ်ဆိုရင် မှတ်ပုံတင်ဖို့ မလိုအပ်ဘူးပေါ့”
“တစ်နှစ်ကာလပြည့်တိုင်း ငှားရမ်းစာချုပ် အသစ်ထပ်မံချုပ် ဆိုမယ်ဆိုရင်တော့ အိမ်ငှားစာချုပ် ကို မှတ်ပုံတင်လိုမှတင်နိုင်တယ်လို့ ဥပဒေက ဆိုပါတယ်”
တိုက်ခန်းဝယ်လျှင် အခွန်ဆောင်ဖို့ လိုပါသလား
များသောအား ဖြင့် တိုက်ခန်းရောင်းဝယ်တဲ့အခါ မှာ ဝယ်ခွန်မဆောင်ဘဲနေကြတာ များပါတယ်။ မြေကွက်ကိစ္စတွေ က တော့ အမည်ပေါက်ပြောင်းမယ်ဆို ရင် ဝယ်ခွန်ဆောင်ပြီးသား ပြေစာ ပါမှ ဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်လို့ မဖြစ်မနေဝယ်ခွန်ဆောင် ကြတာ ဖြစ်တယ်။ တိုက်ခန်းတွေမှာတော့ မဖြစ်မနေ ဝယ်ခွန်ဆောင်ရမယ့် တင်းကျပ်တဲ့ စည်းမျဉ်းလုပ်ထုံး လုပ် နည်းထုတ်ပြန် ထားတာမတွေ့ ရဘူး။ ဒီအချက်ကြောင့်လည်း ဝယ်ခွန်မဆောင်ဘဲ ရောင်းဝယ်နေ ကြတာဖြစ်တယ်”
ဆွေမျိုးရင်းချာမရှိသော ကွယ်လွန်သူပိုင် မြေနှင့် အိမ်ကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
“အကောင်းဆုံးကတော့ ဥပဒေနဲ့အညီ အမွေထိန်းစာ လျှောက်ဖို့လိုမယ်၊ အမွေထိန်းစာရ မှ အရောင်းအဝယ်မှတ်ပုံတင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရောင်းချတာ အဆင် ပြေဆုံးပဲ”
“အမွေထိန်းစာလျှောက်လို့ ကန့်ကွက်လာရင် အဆင်ပြေပါ့မ လား”
“ကွယ်လွန်သွားတဲ့ ခင်ပွန်းက အိမ်ထောင်ကြီးဖြစ်ပြီး သားသမီး တွေ ကျန်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်လည်း ရောင်းသူက သူငယ်ချင်းကို ပြော ပြမထားဘူးလား”
“မူလကတည်းက ပြောပြရင် စရန်ဘယ်ပေးလိမ့်မလဲ၊ စဉ်းစား မှာပါ့။ အခုတော့ မြေပုံကူးဖို့နဲ့ မှတ်ပုံတင်ရုံးမှာ သူတစ်ဦးတည်း ပိုင်ကြောင်း စာချုပ်ပြုလုပ်ရမှာမို့ စရန်ချပါဆိုတာနဲ့ စရန်ငွေချပေး ထားခဲ့တယ်”
အိမ်ထောင်နှစ်ဆက်နှင့်အထက် ရှိသူထံမှ အိမ်မြေဝယ်မည်ဆိုလျှင်
တစ်ခါတစ်ရံမှာ ပထမဇနီးနဲ့လည်း တရားဝင်မကွာ ထားဘူး။ ဒုတိယဇနီးနဲ့လည်း ပေါင်းသင်းနေတာ မျိုးရှိတတ်တယ်။ ပထမဇနီးနဲ့ ခွဲခွာနေတယ်ဆိုပေ မယ့် ဝင်ထွက်သွားလာဆက်ဆံမှု ရှိနေမယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဆို ရင်တော့ ပထမ မိန်းမအနေနဲ့ ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ ကျန်ရစ် ပစ္စည်းပေါ် မှာ အမွေရပိုင်ခွင့်ရှိမှာဖြစ်တယ်”
မိသားစုစီမံမှုဖြင့် ခွဲဝေထားသည်ဆိုသော အိမ်မြေတိုက်ခန်းတို့ကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
“မိသားစုအားလုံးက သဘော တူရင်တော့ဖြစ်တယ်။ မိသားစု အားလုံးဆိုတာက မိဘနှစ်ဦးလုံးရှိ သေးရင်လည်း ပါမယ်ပေါ့။ အဓိက အချက်ကတော့ အမွေဆက်ခံမယ့် သားသမီးအားလုံးက သဘောတူရ မှာဖြစ်တယ်။ သားသမီးအားလုံးဆိုတာ သားသမီးလေးဦးရှိရင် လေးဦး လုံးက သဘောတူညီချက်နဲ့ အမွေ ခွဲဝေပေးတာမျိုးဖြစ်ရမယ်”
တိုက်ခန်းကြိုပွိုင့် ဝယ်သူတို့၏ အခက်အခဲ
“တိုက်ခန်းလူနေခွင့်လည်း မရသေးဘူး။ အခန်းလည်း မအပ် ဘဲနဲ့ ကျန်ငွေကို ပေးချေဖို့တောင်း နေတယ်။ ဘယ်လို ဆောင်ရွက်ရမ လဲဆိုတာ ဆွေးနွေးတာ သူငယ်ချင်း”
“အင်း ဒီလိုကိစ္စတွေကတော့ မကြာမကြာဖြစ်နေတတ်တဲ့ ကိစ္စ တွေပါ သူငယ်ချင်း”
ဝယ်မည့်မြေနှင့်အိမ်မှာ နိုင်ငံခြားသားပိုင် အမည်ပေါက် ဖြစ်နေလျှင်
ဒီလို အန်ကယ်ရယ်၊ ကျွန် တော်တို့အားလုံးကလည်း ဒီမှာ အနေနည်းကြတော့ မြေတစ်ပိုင်း ကို ရောင်းမယ်စိတ်ကူးတယ်။ ဝယ်သူလည်းရှိတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ အန်ကယ် ပြောသလို မြေကွက်အမည် ပြောင်း ပေါ့နော်။ အမွေဆက်ခံခွင့်နဲ့ ရောင်းချဖို့ မြို့တော်စည်ပင်သာ ယာရုံးမှာ မြေပုံလျှောက်ပါတယ်။ မြေကွက်အမည်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ အဘိုးက နိုင်ငံခြားသားဖြစ်နေလို့ မြေပုံထုတ်ယူခွင့်မရဖြစ်နေတယ်။
ပါမစ်မြေကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင် – ၁
“ကတိစာချုပ်ဆိုရင်တော့ မှတ် ပုံတင်ဖို့ မလိုဘူးပေါ့ ဟုတ်လား”
“မှန်ပါတယ်။ ပစ္စည်းလက် ဝယ်ရရှိထားပေမယ့် ဥပဒေနဲ့အညီ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အတွက် ဆောင်ရွက်ပေးရမယ့် တာဝန်၊ ဝယ်ယူ သူ ဘက် ကလည်း ပစ္စည်း တန်ဖိုး ပေးချေရမည့် အခြေအနေ၊ ဝယ်ခွန်ကိစ္စ စသည်ဖြင့် တာဝန် များကို ဖော်ပြပြီး ကတိပြု စာချုပ် အဖြစ် ချုပ်ဆိုထားကြတာပဲဖြစ် တယ်။ ကတိစာချုပ်ကတော့ သူ ငယ်ချင်းပြောသလို မှတ်ပုံတင်ဖို့မ လိုအပ်သေးဘူး။
ပါမစ်မြေကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင် – ၂
“သားသမီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်။ တစ်ဦးစီက မြေကွက်ကိုခွဲပြီး အိမ် ဆောက်နေထိုင်ကြတယ်။ အခုရောင်းမယ်ဆိုသူက သားဖြစ်သူနေ တဲ့ အပိုင်းကို ရောင်းမှာဖြစ်တယ်”
“ခက်တာက ပါမစ်မူရင်းက အ ခြားဘက်ခြမ်းမှာ နေတဲ့ သူ့ညီမလက် ထဲမှာရှိတယ်။ သူ့လက်ထဲမှာ မိတ္တူ ဓာတ်ပုံမိတ္တူပဲရှိတယ် လို့ ပြောတယ်။ ဒါကြောင့် ဝယ်ဖို့ အဆင်ပြေပါ့မလား သိချင်တာ”
သေတမ်းစာပူးတွဲပါရှိသည့် အမွေထိန်းစာရသူထံမှ မြေနှင့်အိမ်ကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
သေတမ်း စာက သေပြီးမှ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်။ မြန်မာ့ ဗုဒ်္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ ပေးကမ်းခြင်း မှတ်ပုံတင် စာချုပ်က ပေးသူ မကွယ်လွန်မီမှာ စိတ်ကြည် လင်စွာနဲ့ ပေးကမ်းပြီး ပေးကမ်းသူ ကိုယ်တိုင် ပေးကမ်းခြင်းမှတ်ပုံတင် စာချုပ်မှာ လက်ဗွေနှိပ် လက်မှတ်ရေး ထိုးပေးတာဖြစ်တယ်။ လက်ခံရယူ သူကလည်း လက်ခံရရှိကြောင်း လက်ဗွေနှိပ်၊ လက်မှတ်ရေးထိုးတာ ဖြစ်လို့ စာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့ ရက်ကစပြီး လက်ခံသူက ဥပဒေနဲ့အညီပိုင် ဆိုင် ခွင့်ရသွားပြီးဖြစ်တယ်”
အရောင်းအဝယ် ကတိစာချုပ်ကို ရောင်းသူနှင့် မချုပ်ဆိုဘဲ ဂရန်အမည်ပေါက်သူနှင့် ချုပ်ဆိုမည်ဆိုလျှင်
“ဂရန်အမည်ပေါက်နဲ့ တိုက်ရိုက် စာချုပ် ချုပ်ရင် အမှန်တကယ် ရောင်းသူက အမြတ်ခွန် (ရောင်းခွန်) ဆောင်ဖို့မလိုတော့ဘူးပေါ့”
“အေးပေါ့၊ ငွေပိုက်ပြီးသူက ထွက်သွားရုံပဲ၊ ဘာတာဝန်မှ မရှိ တော့ဘူး”
“ဒါဆိုရင် မှတ်ပုံတင် အရောင်းအဝယ် စာချုပ်မချုပ်မီ အရောင်းအဝယ် ကတိစာချုပ်တော့ ချုပ်ထား ဖို့လိုမှာပေါ့နော်”
မိဘများ မကွယ်လွန်မီ သားသမီးက အမွေဆိုင်ပစ္စည်းဟု ကန့်ကွက်ထားသည့် မြေနှင့်အိမ်ကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
“နောက်ပိုင်းမှ သိရတာက သမီး က သဘောမတူသူနဲ့ အိမ်ထောင်ပြု လို့ အမေရှိစဉ်ကတည်းက သမီးအ ဖြစ်မှ စွန့်လွှတ်ကြောင်း သတင်းစာထဲ မှာ ကြေညာထားတယ်လို့ ပြောတာပဲ၊ အမွေပြတ် စွန့်လွှတ်ထားလို့ သူနဲ့ မဆိုင်ဘူးဆိုပြီး ပြောတယ်”
“အင်းပေါ့လေ၊ နောက်ပိုင်း အမွေအဖြစ် တောင်းဆိုမှာစိုးလို့ အိမ် ကို ရောင်းလိုက်တဲ့ သဘောပေါ့”
လင်မယားကွာရှင်းပြီးနောက် ကိတ္တိမမွေးစားစာချုပ် ပြုလုပ်မွေးစားခံရသူထံမှ မြေနှင့်အိမ်ကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
“လင်မယား ကွာရှင်းပြီးမှ မွေးစား စာချုပ်ပြုလုပ်တာမို့ တရားမဝင် ဘူးဆိုပြီး ကန့်ကွက်တာဆရာ”
“မွေးစားစာချုပ်က တရားမဝင် လို့ ကွယ်လွန်သူရဲ့ ဝေစုကို အစ်ကို ဖြစ်သူက ရထိုက်တယ်ဆိုပြီး ပြောမှာ ပေါ့”
“ဟုတ်တယ် ဆရာ၊ သူ့ရပိုင်ခွင့် မရရင် တရားစွဲမယ်ဆိုတာနဲ့ အရောင်းအဝယ် ပျက်သွားတယ်။ ဒီလို ကိစ္စရပ်မျိုးဆိုရင် ဥပဒေအရ ဘယ် လိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ သိချင်လို့ ဆရာ”
“မိခင်ဖြစ်သူက အမွေထိန်းစာကို တရားရုံးမှာ လျှောက်ထားရင် လင်ယောကျ်ားဘက်က မိဘတွေကလည်း ကန့်ကွက်လျှောက်ထားမှာပဲ လေ၊ သိပ်တော့ မထူးပါဘူး။ အ ရောင်းအဝယ်ကတော့ ရပ်သွားမှာပဲ
ပြစ်မှုတစ်ခုခုနှင့် ငြိစွန်းပတ်သက်နေသည့် အိမ်နှင့်မြေကို မဝယ်မိစေဖို့
“ငွေချေဖို့ရက်ချိန်းမတိုင်မီ တစ်ပတ်ခန့်မှာပဲ အိမ်ရှင်က ဖုန်းဆက်တယ်။ နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက် နောက်ဆုတ်ချင်တယ်လို့ ပြောတယ်။ ဒါနဲ့ စိတ်ထဲမှာ မတင်မကျဖြစ်လို့ အိမ်ကို သွားကြည့်တော့ ချိပ်ပိတ်ခံ ထားရတာကို တွေ့လိုက်ရတယ်”
ပိုင်ဆိုင်ခွင့် မရသေးသော်လည်း လက်ဝယ်ထားခွင့်ရှိသည့် အရောင်းအဝယ် အရပ်စာချုပ်များ
“အခုကိစ္စက ဝယ်ထားသူနှစ်ဦး လုံးက မှတ်ပုံတင် စာချုပ် မချုပ်ရ သေးဘူး။ အရပ်ကတိစာချုပ်တွေနဲ့ပဲ ဝယ်ထားတာဆိုတော့ ဘယ်လိုဖြစ်နိုင် သလဲ”
“ပထမဝယ်ထားသူကလည်း အရပ်စာချုပ်နဲ့ပဲ ဝယ်ထားတယ်ဆို တော့ ဥပဒေအရ ပြောရရင်နှစ်ဦးလုံး ဥပဒေနဲ့အညီ ပိုင်ဆိုင်မှု မရသေးဘူး လို့ပဲ ပြောရမယ်”
အပျောက်စနစ်ဖြင့် တိုက်ခန်း ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
အပျောက်စနစ်ဖြင့် တိုက်ခန်း ဝယ်မည်ဆိုလျှင် မကြာမီရက်ပိုင်းအတွင်းက ဖြစ်သည်။ မိတ်ဆွေတစ်ဦးက စာရေးသူ ထံရောက်လာပြီး တိုက်ခန်းဝယ်မည် ဖြစ်၍ စာရွက်စာတမ်းများ ကို ကြည့် ရှုစစ်ဆေးပေးရန် လာခေါ်ပါသည်။ သို့နှင့် စာရေးသူသည် မိတ်ဆွေနှင့် အတူ ရောင်းမည်ဆိုသည့် တိုက်ခန်း ရှိရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ တိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ဆိုသူနှင့် အိမ် ပွဲစားများကို တွေ့ရသည်။ တိုက်ခန်း ပိုင်ရှင်မှ ယင်းတိုက်ခန်း ဝယ်စဉ်က ချုပ်ဆိုခဲ့သော တိုက်ခန်း အရောင်း အဝယ်စာချုပ်ကို ထုတ်ပြပါသည်။ စာချုပ်ပေါ်တွင် ရောင်းသူ၊ ဝယ်သူ နှင့် သက်သေနှစ်ဦးလက်မှတ်ရေးထိုး ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ သို့သော် မြေရှင်၏ အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ် ထိုးထားသည်ကို မတွေ့ရှိရပေ။ ထို့ကြောင့် စာရေးသူမှ ရောင်း မည့်သူအား အဆိုပါ တိုက်ခန်းအ […]
အိမ်ခြံမြေ ရောင်းဝယ်ခြင်းနှင့် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ သိမှတ်ဖွယ်ရာ
အထွေထွေ ကိုယ်စား လှယ်လွှဲစာ(G.P) အရ လွှဲအပ်ခြင်း ခံရသူသည် လွှဲအပ်သူ၏ လုပ်ငန်းကိစ္စအရပ်ရပ်ကို လွှဲအပ်သူ၏ ကိုယ်စား လုပ်ပိုင်ခွင့် ရရှိပေသည်။ အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲ စာ (S.P) မှာမူ၊ လွှဲအပ်သူက ခွင့် ပြုထားသည့်အကြောင်းအရာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုသာ ကိုယ်စားလှယ်စာရ သူက လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိပေသည်။
အဘိုးအဘွားတော်စပ်သူ၏ မြေနှင့်အိမ်ကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
ကန့် ကွက်နိုင်ကြောင်း သတင်းစာမှာ ထည့် ကြေညာလိုက်တော့ ကန့်ကွက်သူပေါ် လာတယ်”
“ဘယ်သူက ကန့်ကွက်တာလဲ၊ ကိတ္တိမမွေးစားသားသမီးရှိလို့လား”
“အဲဒီလို မဟုတ်ဘူးဆရာ။ မြေး ဖြစ်သူက ကန့်ကွက်တာ ဆရာ”
ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ပြင်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေသိမှတ်ဖွယ်ရာ
အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ အဆောက်အအုံတစ်ခုခုကို အ သစ်ဆောက် လုပ်ခြင်း၊ တိုးချဲ့ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ အကြီးစား သို့မ ဟုတ် အသေးစား ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ခြံစည်းရိုးကို မည်သည့် ပစ္စည်းဖြင့် ဖြစ်စေ၊ ကာရံခြင်း၊ ဖြိုချက်ခြင်းတို့ကို ဆိုလိုသည်
အိမ်ခြံမြေတိုက်ခန်း အဝယ်မမှားစေဖို့ – ၁
ဂရန်သက်တမ်းတိုးပြီးမှသာ အရောင်းအဝယ် မှတ်ပုံတင်စာ ချုပ်ကိုချုပ်ဆိုနိုင် မည်ဖြစ် သည်။ သို့ရာတွင် တရားရုံး၏ အမိန့်ဒီဂရီအရဆိုလျှင် ဂရန်သက်တမ်းကုန်သော်လည်း မှတ်ပုံတင် အရောင်းအဝယ် စာချုပ်ကို ချုပ်ဆိုနိုင်ပေသည်။
ဥယျာဉ်ခြံမြေ အိမ်ကို ဝယ်မည် ဆိုလျှင်
လွယ်လွယ်ကူကူ မှတ်သား ထားမယ်ဆိုရင်တော့ လယ်မြေ၊ ယာမြေ၊ ကိုင်းကျွန်းမြေ၊ ဟင်းသီး ဟင်းရွက် ပန်းမန်စိုက်ပျိုးတဲ့ ခြံ မြေ၊ ဥယျာဉ်မြေတို့ အားလုံး လယ် ယာမြေ အမျိုးအစားထဲမှာ ပါဝင် တယ်”
“လယ်ယာမြေဆိုရင် အ ရောင်းအဝယ် လုပ်လို့မရဘူးမ ဟုတ်လား”
အိမ်ခြံမြေတိုက်ခန်း အဝယ်မမှားစေဖို့ – ၂
ဥယျာဉ်ခြံမြေ၊ ပါမစ်မြေတို့မှာမူစာချုပ်စာ တမ်း မှတ်ပုံတင်ရုံးတွင် အရောင်း အဝယ် မှတ်ပုံတင်စာချုပ်ပြုလုပ် ချုပ်ဆိုခွင့် မပြုသည့် မြေအမျိုး အစားတွင် ပါဝင်သဖြင့် အရောင်း အဝယ် ကတိစာချုပ်- Sale Contract ဖြင့် သာ လွှဲပြောင်းဝယ်ယူကြ ပြီး ထိုမှတစ်ဆင့် ဂရန်သစ် လျှောက်ထားကြရပေသည်။
အိမ်ခြံမြေတိုက်ခန်း အဝယ်မမှားစေဖို့ – ၃
တိုက်ခန်းများဆိုလျှင် ဝယ်ထားသည်ဟုဆိုသူများက ဝင် ပေါက်တံခါးကို သော့များ ထပ်ဆင့် ခတ်ထားသဖြင့် အမှုအခင်းများ ဖြစ်ကာ အချိန်ကုန်၊ ငွေကုန်နှင့် အခက်အခဲမျိုးစုံ ကြုံကြရပေ သည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အိမ်ခြံမြေ တိုက်ခန်းများ အဝယ်မမှားဖို့ အထူးသတိပြုသင့် ပါသည်။
မိရင်းဘရင်းထံမှ အမွေဆက်ခံခွင့် ရှိ မရှိ ကိတ္တိမ မွေးစားခံရသူ၏ အခွင့်အရေး
“ဟုတ်ပါတယ်။ ဥပဒေအရ ပြောရရင် ကိတ္တိမမွေးစားစာချုပ်နဲ့ မွေးစားခြင်းဆိုတာ မွေးစားမိဘ တွေက အမွေစားအမွေခံအဖြစ် မွေးစားတာပဲဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် မိရင်းဖရင်းရဲ့ အမွေကို ခံစားခွင့် မရှိဘူးလို့ ပြဋ္ဌာန်းထားတယ်။ ဒါ ပေမယ့် ခြွင်းချက်သဘောမျိုးတော့ ရှိသေးတယ်”
အန္တရာယ်ရှိ အဆောက်အအုံအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် လိုက်နာရန် အချက်များ
“အန္တရာယ်ရှိ အဆောက်အ အုံအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးပေမယ့် နေထိုင်သူတွေက ဆင်းမပေးဘဲ နေနိုင်သမျှ ဆက်နေရင် ဘာဖြစ် နိုင်သလဲ”
“ပုဒ်မ ၅၂ မှာ ပုဒ်မ ၅၁ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို နေ ထိုင်သူတို့က လိုက်နာရန် ပျက် ကွက်လျှင် ပျက်ကွက်သူထံ မြို့ တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ၏ ဖျက်သိမ်းဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေး အဖွဲ့က ရက်ပေါင်း ၃ဝ အတွင်း ဖျက်သိမ်းရှင်းလင်းဖယ်ရှားပေးရန် အမိန့်ထုတ်ဆင့်နိုင်တယ်။
ခရစ်ယာန်ဘာသာအရ မွေးစားထားသူထံမှ အိမ်နှင့်‌မြေကိုဝယ်မည်ဆိုလျှင်
“ကောက်ယူမွေးစားခံရတဲ့ သား သမီးအနေနဲ့ သားရင်း၊ သမီးရင်း ကိတ္တိမမွေးစားသားသမီးမရှိမှ အမွေ ရခွင့်ရှိမှာဖြစ်တယ်။ ထူးခြားတာက မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက သား သမီးမွေးစားတဲ့ ကိစ္စရပ်မှာ အမွေ ဆက်ခံခွင့်အထိ စဉ်းစားပြီး ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းထားတာကို တွေ့ရတယ်”
“ခရစ်ယာန်ဘာသာမှာတော့ မွေးစားခြင်းဥပဒေမရှိဘူးမဟုတ် လား”
အိမ်ထောင်ရေးပြစ်မှုကျူးလွန်သူ၏ ပိုင်ဆိုင်ရာ မြေနှင့်အိမ်ကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
“နောက်မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ လင်ယောကျ်ားကဖောက်ပြန်ပေါင်း သင်းနေလို့ဆိုပြီး အိမ်ပွဲစားကတော့ပြောတာပဲ၊ ဂရန်အမည်ပေါက်က မိန်းမအမည်ပေါက်ဆိုတော့ တားပိုင် ခွင့်မရှိဘူးလို့လည်း ပြောကြတယ်”
“အိမ်မြေအမည်ပေါက်က ဇနီးသည် အမည်ပေါက်ဖြစ်ပေမယ့် ဒီပစ္စည်းဟာ လင်မယားလက်ထပ်ပြီးမှဖြစ်ထွန်းတဲ့ လက်ထက်ပွား ပစ္စည်း၊ အမွေရပစ္စည်းစတဲ့ အခြေအနေမျိုး ဆိုရင် လင်မယားနှစ်ဦးပိုင် ပစ္စည်းအဖြစ်တည်ရှိနေမှာပဲဖြစ်တယ်”
အရွယ်မရောက်သေးသည့် သားသမီးများ၏ပစ္စည်းများကို မိဘများက ရောင်းမည်ဆိုလျှင်
“သားသမီးတွေက ပူးတွဲပိုင်ရှင်ဖြစ်လို့ သူတို့ရဲ့သဘောတူညီချက်မရှိဘဲ ရောင်းလို့မရဘူးလို့ အချို့ကပြောကြတယ်”
“အင်းပေါ့။ သားသမီးတွေအမည်နဲ့ ဝယ်ထားတာဆိုတော့ သူတို့လည်း ပူးတွဲပိုင်ရှင်ဖြစ်လာပြီပေါ့။ အခုအချိန်မှာ သားသမီးနှစ်ဦးလုံးက အသက် ၁၅ နှစ် မပြည့်သေးဘူး လား”
ချွေးမ (သို့) သမက်ထံမှ အိမ်နှင့်မြေကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
“ဇနီးသည်ရဲ့ အသိတစ်ယောက် နေတဲ့ အိမ်ဆရာ၊ ချွေးမက ရောင်းမယ်ဆိုတော့ ယောက္ခမနဲ့ သားသမီးတွေက ကန့်ကွက်တယ်။ ယောက္ခမက ဦးဆောင်ရောင်း မယ်ဆိုတော့လည်း ချွေးမကကန့်ကွက်ပြန်တယ်။ ဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်သလဲလို့”
“မြေနဲ့အိမ်က ဂရန်မြေလား၊ ဘယ်လို မြေအမျိုးအစားလဲ”
ကွဲကွာနေသောဇနီးသည်နှင့် ဆက်စပ်နေမည့် မြေနှင့်အိမ်ကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
“ပထမဇနီး နယ်ပြန်သွားလို့ နှစ်နှစ်လောက်ရှိတော့ အခုဇနီးနဲ့ တရားဝင်လက်ထပ်နေတယ်လို့ အဲဒီအမျိုးသားရဲ့ နှမဖြစ်သူက ရှင်းပြတယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ ပထမဇနီးက အိမ်ထောင်ကျသွားတယ်လို့ ကြားတယ်။ အဆက်အသွယ်မရှိတော့ မသိတော့ဘူးလို့ ပြောပါတယ်”
ကိတ္တိမ မွေးစားသားသမီးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် မြေနှင့်အိမ်ကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
“ကွယ်လွန်သူမှာ အိမ်ထောင် မရှိ၊ လူပျိုအပျိုဖြစ်ပြီး ကွယ်လွန်သူက အငယ်ဆုံးသားသမီးဖြစ်ရင် သူရဲ့ အမွေဝေစုကို အထက်က အစ်ကိုအစ်မတွေက ရရှိမှာဖြစ်တယ်။ တကယ်လို့ ကွယ်လွန်သူရဲ့အောက်မှာ မောင်တွေ၊ ညီမတွေရှိရင်တော့ အထက်က အစ်မတွေ၊ အစ်ကိုတွေက အမွေရပိုင်ခွင့်မရှိဘဲ မောင်ငယ်၊ ညီမငယ်များကသာ ကွယ်လွန်သူ အစ်မရဲ့ဝေစုကို ခွဲဝေရရှိကြမှာ ဖြစ်တယ်။
“မှန်ပါတယ်။ ကွယ်လွန်သူဟာ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်အဖြစ် ကွယ်လွန်သွားရင် ခရစ်ယာန် ဥပဒေအရဆုံးဖြတ်ရမယ်။ ကွယ်လွန်သူဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖြစ်နဲ့ ကွယ်လွန်ရင် ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်း ဥပဒေနဲ့အညီ ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်”
အမွေဆိုင်မြေကွက်ကိုခွဲ၍ ရောင်းချခြင်း၊ လှူဒါန်းခြင်း ပြုမည်ဆိုလျှင်
“အဘိုး၊ အဘွား မကွယ်လွန်မီက မိမိပိုင်ပစ္စည်းများကို သားသမီး သုံးယောက်အား အမွေခွဲဝေပေးကြောင်းဖော်ပြပြီး သားသမီးသုံးဦးလုံးက သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုး ထားကြတဲ့ စာချုပ်စာတမ်းရှိဖို့လိုတယ်။ အဲဒီလို ဦးလေးဖြစ်သူကိုယ်တိုင် သဘောတူထားတဲ့ အမွေခွဲဝေပေးကြောင်း စာချုပ်စာတမ်းမရှိရင်တော့ ဦးလေးဖြစ်သူက ကန့်ကွက် ပိုင်ခွင့်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်”
နှစ်ဦးအမည်နှင့် ဝယ်ထားသည့် အိမ်ခြံမြေ တိုက်ခန်းကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
“ဖခင်အနေနဲ့ မိရင်းသေဆုံးစဉ်က ကျန်ရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေအပေါ် သားသမီးတွေကို အမွေခွဲမပေးခဲ့ရင် တော့ ဖခင်ကွယ်လွန်တဲ့အချိန်မှာ ဖခင်နဲ့ နောက်အိမ်ထောင်လက်ထက်ပွား ပစ္စည်းအပါအဝင် မိခင်ပိုင် ဝေစု ကို တောင်းဆိုခွင့်ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒီ တိုက်ခန်းတစ်ခုတည်းသာမဟုတ်ဘဲ အခြားပစ္စည်းတွေ ကျန်ရှိ နေရင် သားသမီးအားလုံးက အမွေပစ္စည်းအဖြစ် အမွေတောင်းခွင့်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်”
ကိတ္တိမသားသမီးသည် မွေးစားမိဘထံမှ သြရသ သားသမီးအဖြစ် မရနိုင်
“အစကတော့ ပွဲစားအမျိုးသမီးက အဘွားကြီးနဲ့ ဆွေမျိုးတော်စပ်သူထံ သွားရောက်စုံစမ်းတယ်ပြောတယ်။ နောက်တော့ အဘွားကြီးကိုယ်တိုင်က သူ့ကိုဖွင့်ပြောပြီး အဲဒီမွေးစားသားက အိမ်ရောင်းရငွေရဲ့ လေးပုံတစ်ပုံ ပေးရမယ်လို့တောင်းတယ်။ ဒါကြောင့် အရောင်းအဝယ်ရပ်ဆိုင်း ထားရကြောင်း ပြောပြတယ်လို့ ဆိုပါ တယ်”
အမည်ခံ အမည်ငှားကို ဂရန်ထုတ်ပေးနိုင်ပါသလား
“ကွယ်လွန်သူရဲ့ အစ်မအရင်းက ကန့်ကွက်တာ။ ဒီမြေကွက်ကို အစ်မဖြစ်သူက ငွေစိုက်ထုတ်ဝယ်ထားပြီး မောင်ဖြစ်သူ မိသားစုကို ခွင့် ပြုချက်နဲ့ ထားတယ်ပြောတယ်။ နောက်ပိုင်း မောင်ဖြစ်သူက နိုင်ငံခြား သင်္ဘောတက်ဖို့ ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင် ခွင့်ပြရမယ်ဆိုပြီး မောင်ရဲ့ အမည်နဲ့ အရောင်းအဝယ် စာချုပ်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ ဂရန်လျှောက်တော့လည်း မောင်ရဲ့ အမည်နဲ့ လျှောက်ထားပြီး ရခဲ့တယ်ပြောတာပဲ။ ဒါကြောင့် အစ်မဖြစ်သူက သူပိုင်တယ်ဆိုပြီး ကန့်ကွက်တာ”
သြရသသားသမီး အခွင့်အရေးနှင့် အိမ် ခြံ မြေ ရောင်းဝယ်ခြင်း
“အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ သားဖြစ်သူသည် အဖကွယ်လွန်လျှင် အဖနေရာတွင် ဝင်ရောက််၍ စီးပွားရှာဖွေခြင်း၊ သမီးဖြစ်လျှင် မိခင်ကွယ်လွန်သည့်အခါ မိခင်၏ နေရာ တွင်ဝင်ရောက်၍ အိမ်ထောင်ထိန်း သိမ်းတာဝန်ကို ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ဖြင့် ကျန်ရစ်သည့် ညီငယ်ညီမငယ်များအား ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သည့်အတွက် သြရသအခွင့်အရေးအဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြောင်း ဓမ္မသတ်၊ ဖြတ်ထုံးတွေမှာ ဖော်ပြထားတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်”
မေတ္တာဖြင့်ပေးကမ်းထားသည့် မြေနှင့်အိမ်ကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
“သမီးဖြစ်သူ ပြောတာတော့ မိခင်က ဒီအိမ်နဲ့ မြေကို မှတ်ပုံတင် စာချုပ်ရုံးမှာ မှတ်ပုံတင် အပေး စာချုပ်ချုပ်ဆို လွှဲပြောင်းပေးကမ်းထား တဲ့အတွက် သူပိုင်သွားပြီဖြစ်လို့ ကန့် ကွက်ခွင့်မရှိ၊ ရောင်းပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ ပြောတယ်။ အဲဒါဖြစ်နိုင်ပါသလား”
“မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေ အရတော့ မိဘမှသားသမီး၊ မြေး၊ မြစ် စသူတွေထံ မိမိပိုင် ပစ္စည်းကို မိမိ အသက်ရှင်နေစဉ်ကာလမှာ အပြီးအပိုင် လွှဲပြောင်းပေးကမ်းနိုင်တယ်။ တရားဝင်ဖြစ်ဖို့ စာချုပ်စာတမ်းချုပ် ဆိုဖို့ လိုတယ်”
အမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ထားသည့် သားသမီးနှင့် ဆက်စပ်နေသော မြေနှင့်အိမ်ကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
“ကျန်တဲ့ မောင်နှမနှစ်ယောက်ရဲ့ ပြောစကားအရတော့ မိဘများ သက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ်ကတည်းက အငယ်ဆုံးသမီးကို အမွေစားအမွေခံ သမီးအဖြစ်မှ အပြီးအပြတ်စွန့်လွှတ် ကြောင်း ကြေညာထားတယ်လို့ ပြောတယ်”
“ဒါကြောင့် အမွေရပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ မပေးနိုင်ဘူးပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ အရောင်းအဝယ်ရပ်သွားပြီး သူငယ်ချင်းက လောလောဆယ် စရန်ငွေဆုံးရှုံးရတော့မလို ဖြစ်နေတာပေါ့”
အိမ်မြေရောင်းသည့် အမွေထိန်းစာရသူ ကွယ်လွန်သွားပါက အရောင်းအဝယ်ပျက်ပြယ်ပါသလား
“ငွေတော့ အကြေမချေဖြစ်ဘူး။ စရန်ငွေပေးပြီး မကြာမီရက်ပိုင်းမှာပဲ အမွေထိန်းစာရသူ ကွယ်လွန်သွားတယ်”
“ဒီတော့ အရောင်းအဝယ်မဖြစ် လိုက်တော့ဘူးလို့ ပြောချင်တာလား”
“ဟုတ်တယ်။ ကျန်တဲ့ အမွေရှင်တွေက စရန်ငွေပြန်ယူပါ။ မရောင်းတော့ဘူးဆိုလို့ ဥပဒေအရ အမှန်တကယ်ပဲ အရောင်းအဝယ် ပျက်သွားတာလား”
ခွင့်ပြုချက်ဘောင် ကျော်လွန်ဆောက်လုပ်ထားသည့်အိမ်ကို ဝယ်မိလျှင်
“အခုကိစ္စက မူလ ပေ၂ဝxပေ ၆ဝ ဆိုပေမယ့် ပေ ၆ဝ မပြည့်ဘူး။ နောက်ဘက်လမ်းကြားအထိ ယူ ဆောက်ထားတယ်ပြောတယ်။ အချို့က ပြောတော့လည်း အရင်က မီးတားလမ်းဆိုလား၊ မီးတားမြေဆိုလားပြောတယ်”
ရပ်ဆိုင်းနေသည့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် မြေရှင်တို့၏အခက်အခဲ
“အစမူလ စာချုပ်ချုပ်စဉ်က အလိုက်ငွေကျပ်သိန်း ၁၅ဝ နဲ့ အခန်းတစ်ခြမ်းပေးတစ်ခြမ်းယူချုပ်ခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းအရောင်းအဝယ်အေးသွား တာရယ်။ ကုန်ပစ္စည်းတန်ဖိုး၊ ဘိလပ်မြေ၊ အုတ်၊ သဲ တန်ဖိုးမြင့်လာလို့ သူ့ကိုထပ်ပြီး တစ်ခန်းပေးပါဆိုတာနဲ့ သဘောတူထားတယ်”
နှုတ်ဖြင့်အမွေခွဲထားသည့် အိမ်နှင့်မြေကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
“ကျွန်တော်က ကန့်ကွက်ရန် ရှိမရှိ ကြေညာလိုက်တော့ ကိတ္တိမသမီးဆိုပြီး ကန့်ကွက်သူပေါ်လာ လို့”
“သူငယ်ချင်းရဲ့ မိဘများ သက်ရှိ ထင်ရှားရှိစဉ်က မွေးစားတာလား”
“သူ့အမေဆုံးပြီး နောက်ပိုင်း သူ့အဖေတစ်ဦးတည်းက မွေးစားစာချုပ်နဲ့ မွေးစားတယ်လို့ သိရတယ်။ သူက သင်္ဘောတက်နေတော့ မွေးစားတဲ့ကိစ္စ လုံးဝမသိလိုက်ဘူးပြောတယ်”
ရဟန်းဘောင်သို့ ကူးပြောင်းသွားသည့်သူ၏ မြေနှင့်အိမ်ကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
“ဒီနေရာမှာ အဓိပ္ပာယ်လွဲမှား နေကြတာရှိတယ်။ လူတစ်ယောက် ရဟန်းပြုသွားရင် လူအဖြစ်နဲ့ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ ပစ္စည်းများအပေါ် ပိုင်ဆိုင်ခွင့် မရှိတော့ဘူးဆိုတာတော့ ဥပဒေအရ မှန်ကန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရဟန်းပြုသွားတဲ့သူ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကို အမွေဆက်ခံခွင့်မရှိလို့တော့ ဥပဒေက ပိတ်ပင်မထားဘူး”
စရန်ငွေပေးပြီး တိုက်ခန်းတွင် ဝင်ရောက်နေထိုင်‌‌ခွင့်ပြုတော့မည်ဆိုလျှင်
“တိုက်ခန်းကတော့ အရေးကြီး တယ်။ မြေဆိုရင်တော့ စာချုပ်စာ တမ်းရုံးမှာ မှတ်ပုံတင်အရောင်းအဝယ် စာချုပ် ချုပ်ဆိုပြီးမြောက်မှသာ အရောင်းအဝယ်ဟာ တရားဝင်ဖြစ်တယ်။
ပိုင်း၍‌ရောင်း‌သော အိမ်နှင့်မြေကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
“နှစ်ဦးလုံးက အရပ်စာချုပ်နဲ့ ဆိုတော့ မှတ်ပုံတင်အရောင်းအဝယ် စာချုပ်ချုပ်ဆိုပေးဖို့ မြေဂရန်အမည် ပေါက်သူနဲ့ ရောင်းသူအပေါ် တရားစွဲဆိုရပါမယ်။ ရုံးတော်ကခွင့်ပြုရင်ရောင်းသူနဲ့ ဝယ်သူမှတ်ပုံတင်ရုံးမှာ အရောင်းအဝယ်မှတ်ပုံတင် စာချုပ်ချုပ်ရမယ်။
“မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေ အရတော့လက်ထပ်မှု တရားဝင်ဖြစ်ဖို့အတွက် အခမ်းအနား၊ လက်ထပ် စာချုပ်ရှိစရာမလိုဘူး။ နှစ်ဦးပေါင်း သင်းနေထိုင်မှုဟာ တရားဝင်လင်မယားအဖြစ် လူသိရှင်ကြားပေါင်းသင်း နေထိုင်မှုဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။
အိမ်ခြံ မြေ တိုက်ခန်း ငှားရမ်းခြင်းနှင့် အခွန်အကောက်ဥပဒေ
“ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ (၆) မှာ ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ စုစုပေါင်းဝင်ငွေထဲက နုတ်ယူခွင့်ပြုထားတဲ့ သက်သာခွင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပဒေအရ တစ်ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ စုစုပေါင်း ဝင်ငွေမှ နုတ်ခွင့်ရတဲ့ အချက်တွေကတော့ (က) အတူနေ မိဘတစ်ဦးလျှင် ကျပ် ၁ဝ သိန်းစီ (ခ) အိမ်ထောင်ဖက် တစ်ဦး အတွက်သာလျှင် ကျပ် ၁ဝ သိန်း (ဂ)သားသမီးတစ်ဦးလျှင် ကျပ် ငါး သိန်း သတ်မှတ်ထားပါတယ်”
“မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေ အရတော့ ဇနီးသည်နဲ့ အိမ်ထောင်မကျမီက ဇနီးသည်ပါလာတဲ့ ပစ္စည်းဟာ အထက်ပါ ပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်။ အဲဒီပစ္စည်းအပေါ်မှာ ဇနီးသည် အသက်ထင်ရှားရှိနေစဉ်မှာတော့ ခင်ပွန်းသည်အနေနဲ့ တောင်းဆိုခွင့်ရပိုင်ခွင့်မရှိဘူး”
“ဒါဆို ဇနီးသည် ပထမအိမ်ထောင်နဲ့ရှိခဲ့တဲ့ ပစ္စည်းအပေါ် ကန့်ကွက်ခွင့် မရှိဘူးပေါ့”
“မှန်ပါတယ်။ ဥပဒေအရ အမွေဆက်ခံရပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့အတွက် ကန့်ကွက်ခွင့်ကို မရှိပါဘူး။
သေတမ်းစာအရပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသော်လည်း အမွေခွဲဝေမပေးထားသည့် မြေနှင့်အိမ်ကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
“တူမဖြစ်သူထံမှာ သေတမ်းစာ မိတ္တူရှိတာဖြစ်လို့ တရားရုံးမှာ သေတမ်းစာပူးတွဲပါရှိသည့် အမွေထိန်း စာလျှောက်ထားရပါမယ်။ အဲဒီ အမွေထိန်းစာရမှ ရောင်းချခွင့်ကို တရားရုံးမှာ ဆက်လက်လျှောက်ထားရယူပြီး တရားရုံးရဲ့ အမိန့်နဲ့ အရောင်းအဝယ်မှတ်ပုံတင်စာချုပ်-ချုပ်ဆို ရောင်းချရမှာဖြစ်ပါတယ်”
“ဆရာပြောသလိုဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေနိုင်တယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် သေတမ်းစာမူရင်းက တစ်ဖက်လူဆီ မှာရှိနေတော့ တရားရင်ဆိုင်ရင် အဆင်ပြေပါ့မလား”
အဆောက်အအုံသစ်တွင် လူနေထိုင်ခွင့်ရအောင် ဘယ်လိုဆောင်ရွက်မလဲ
နည်းဥပဒေ အပိုဒ် (၂၅) တွင် မြို့တော်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီသည် ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဆောက်လုပ်နေသော အဆောက်အအုံတစ်ခုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ငါးနှစ်အတွင်းပြီးစီးအောင် ဆောင်လုပ်ခြင်းမရှိကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိပါက သက်ဆိုင်ရာဆောက်လုပ်ခွင့်ရသူအား ခေါ်ယူညှိနှိုင်း၍ ပြီးစီးအောင်ဆောက်လုပ်ရန် ညွှန်ကြားနိုင် သည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။
ထို့ကြောင့် ဥပဒေအရဆိုလျှင် လူနေထိုင်ခွင့် B.C.C မကျပါက သက်ဆိုင်ရာ တိုက်ခန်းအဆောက်အအုံတွင် ဝင်ရောက်နေထိုင်ခွင့်မရှိပါကြောင်း
ကွန်ဒိုနည်းဥပဒေနှင့် နိုင်ငံခြားသားတို့၏ အခန်းကဏ္ဍ
“လိုင်စင်သက်တမ်းအရဆိုရင် စုပေါင်းပိုင် အဆောက်အအုံတစ်ခု တည်ဆောက်ရာမှာ ငါးနှစ်အတွင်း အပြီးဆောက်ရမယ့်သဘောပေါ့”
“ဒါကတော့ အများသိထားတဲ့အတိုင်း လုပ်ငန်းတည်ထောင်သူသည် စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့်ရရှိပြီးသည့်နောက် အုတ်မြစ်ချလုပ်ငန်း၏ ၃ဝ ရာခိုင် နှုန်းပြီးစီးသည့်အခါ စုပေါင်းပိုင် အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားပြီး အိမ်ခန်းများကို ကြိုတင် ရောင်းချခွင့်ရှိသည်ဟု နည်းဥပဒေ ပုဒ်မ (၃ဝ) မှာ အတိအလင်း ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် လုပ်ငန်း ၃ဝ ရာခိုင်နှုန်းပြီးစီးသည်နှင့် တိုက်ခန်းများကို ကြိုပွိုင့်စနစ်ဖြင့် စတင် ရောင်းချခွင့်ရှိမှာဖြစ်တယ်”
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်သည့် မိသားစုစီမံမှု ကတိစာချုပ်အရ အိမ်နှင့်မြေကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
“စာချုပ်က အပေးစာချုပ်မဟုတ်ဘူး။ မိသားစုစီမံမှု ကတိစာချုပ်ဖြစ်တယ်။ မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်း ဥပဒေမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအနေနဲ့ သေတမ်းစာရေးခွင့်မရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိသားစုများသည် မိသားစုစီမံမှု ကတိစာချုပ်ကို မိသားစုဝင်အားလုံး သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အမွေခွဲဝေ စီမံဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ ဒီနေရာမှာ မိသားစုဝင်အားလုံးက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကိုးကွယ်သူများဖြစ်ရပါမယ်”
“ဒီကိစ္စမှာ သမီးတွေက ခရစ်ယာန်ဖြစ်နေတော့”
လင်မယားနှစ်ဦးအနက် သေတမ်းစာရေးမသွားသော ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် ပိုင်ဆိုင်သည့် မြေနှင့်အိမ်ကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
လင်မယားနှစ်ဦးပိုင် ပစ္စည်းဆိုရင်တော့ တစ်ဦးကွယ်လွန်ရင် ကျန်တစ်ဦးက ခံစားခွင့်ရှိမှာဖြစ်တယ်။ အခုကိစ္စက ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် ဇနီးသည်ရဲ့အမည်နဲ့ ဝယ်ထားပေမယ့် အိမ်ထောင်ကျပြီး လက်ထက်ပွားပစ္စည်း ဆိုရင်တော့ ပူးတွဲပိုင်ရှင်အဖြစ် ရှိနေမှာ ဖြစ်တယ်”
“ဇနီးဖြစ်သူက သေတမ်းစာရေး မသွားရင် ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်သလဲ”
“ဒါကတော့ ကွယ်လွန်သူရဲ့ ဝေစုဖြစ်တဲ့အတွက် ကွယ်လွန်သူကိုးကွယ်ရာ ခရစ်ယာန်ဥပဒေနဲ့ ဆုံးဖြတ် ရမှာဖြစ်တယ်”
ပြဋ္ဌာန်းလာမည့် 2018 ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုအခွန်အကောက်ဥပဒေနှင့် တိုးတက်လာနိုင်မည့် အိမ်ခြံမြေစျေးကွက်
အိမ်မြေစံနှုန်း အသစ်နဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အိမ်မြေ တန်ဖိုးအပေါ် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ပြည် ထောင်စုအခွန်အကောက်ဥပဒေနဲ့အညီ ပထမခြောက်လအတွင်း တင်ပြရင် ၃ ရာခိုင်နှုန်းထမ်းဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံ တင်ခကိုလည်း ယခင် ၇ ရာခိုင် နှုန်းမှ ၄ ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ် လျှော့လိုက်တဲ့အတွက် စုစုပေါင်းပေးသွင်းရမယ့် အခွန်အခမှာ ၇ ရာခိုင်နှုန်းသာဖြစ်ပါ တယ်”
“ဒါဆိုအရင်က ပေးဆောင်ရတဲ့ အခွန်အခနှုန်းထား ၃၇ ရာခိုင်နှုန်းထက် အများကြီးကွာခြားသွားပြီပေါ့ နော်”
စွန့်လွှတ်ကြောင်း ကြေညာခံထားရသည့် ဇနီး၊ ခင်ပွန်းတို့နှင့် ဆက်စပ်နေသော အိမ်နှင့်မြေကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
“ဇနီးဖြစ်သူက နိုင်ငံခြားမှာ နောက်အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတာကတော့ အိမ်မြေအရောင်းအဝယ်ဖြစ် အောင် ဝယ်သူယုံကြည်အောင် ပြောတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ အမှန်တကယ် အိမ်ထောင်ကျနေကြောင်း အထောက်အထားခိုင်လုံရင်တော့ ဥပဒေအရ အမွေရခွင့်မရှိဘူး။ မြန် မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေမှာ မယားဖြစ်သူက ပထမလင်ယောကျ်ားနဲ့ တရားဝင်ကွာရှင်းခြင်းမရှိသေးဘဲ နောက်အိမ်ထောင်ပြုမယ်။ တစ်နည်းပြောရရင် ဖောက်ပြန်မယ်ဆိုရင် မိမိရရှိမယ့် လင်မယားနှစ်ဦးပိုင်ပစ္စည်း များအပေါ် ဆုံးရှုံးခံရမယ်လို့ ပြဋ္ဌာန်း ထားပါတယ်”
“ဒါကြောင့် လင်ယောကျ်ားက ဇနီးနောက်အိမ်ထောင်ပြုသွားလို့ မဆိုင်ဘူးဆိုပြီး ပြောတာဖြစ်မယ်”
ဇနီးကကန့်ကွက်ထားသည့် ခင်ပွန်းသည်အရွယ်မရောက်မီက ဝယ်ထားသော အိမ် မြေ တိုက်ခန်းကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
မိဘတွေက တရုတ်လူမျိုး၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်၊ စီးပွားရေးသမားတွေဆိုတော့ တိုက်ခန်းတွေ၊ အိမ်၊ မြေ ဝယ်ထား တာတွေများနေတော့ သားသမီး အမည်ထားပြီး ဝယ်တာတွေရှိတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသက်မပြည့်တာကို သတိမထားမိဘဲ သူ့အမည်နဲ့ တိုက်ရိုက်စာချုပ် ချုပ်ခဲ့တယ်လို့ ပြောတယ်”
“ဥပဒေအရ ပြောရရင်တော့ အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးမှ အရွယ်ရောက်သူလို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ အရွယ်မရောက်သေးသူက အရောင်းအဝယ်စာချုပ်စာတမ်းချုပ်ဆိုခွင့် မရှိပါဘူး။ တကယ်လို့ ချုပ်ဆိုထားရင်လည်း ဥပဒေအရ ပျက်ပြယ်တဲ့ စာချုပ်ပဲ ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်”
နိုင်ငံခြားသားနှင့် လက်ထပ်ထားသော မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမျိုးသမီး၏ အမည်ပေါက်အိမ်ကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
“ပုဂ္ဂလိကပိုင်မြေပေါ်မှာဆောက်တဲ့ ကွန်ဒိုဖြစ်တဲ့အတွက် အဲဒီလို ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းတွေကို နိုင်ငံခြားသားများက ဝယ်ယူခွင့်၊ လွှဲပြောင်းရောင်းချခွင့်မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း မူလဝယ်စဉ်ကပင် မြန်မာလူမျိုးဖြစ်တဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ အမည်နဲ့ဝယ်ထားတာဖြစ်တယ်”
“လင်ယောကျ်ားဖြစ်သူက ဇနီးအမည်နဲ့ ဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းကို ပြန် လည်ရောင်းချခွင့်မူရှိဘူးလားဆရာ။ လင်ယောကျ်ားရဲ့ စီးပွားရှာဖွေမှုနဲ့ ရလားတဲ့ အဆောက်အအုံဖြစ်လို့ လင်ယောကျ်ားက လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး လား”
“လယ်ယာမြေ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၂ (ဂ) မှာ လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ရောင်းချခြင်း ပေးကမ်းခြင်းပြုလျှင် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ထားသည့် တံဆိပ်ခေါင်းခွန် နှင့် စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ခတို့့ကို ပေးဆောင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် ဦးစီးဌာနရုံးမှာ မှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်ချုပ် ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်”
“ဟုတ်ကဲ့ ဆရာ။ အဲဒီပေးကမ်း လှူဒါန်းထားတဲ့ မြေပေါ်မှာ အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရပါလဲ”
“သာသနာရေးဆိုင်ရာမြေ အဆောက်အအုံတို့အဖြစ် သတ်မှတ် ပေးဖို့ကတော့ သက်ဆိုင်ရာသာသနာ ရေး ဦးစီးဌာနအဆင့်ဆင့်ကို တင်ပြခွင့်ပြုချက်ရယူပြီး ဆောင်ရွက်သွားရ မှာဖြစ်တယ်”
ဖတူမိကွဲ သို့မဟုတ် မိတူဖကွဲသားသမီးများနှင့် ဆက်စပ်နေသော မြေနှင့် အိမ်ကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
ကန့်ကွက် ကြောင်း သတင်းစာထဲပါလာတော့ ကျွန်တော်လည်း ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ပျာယာခတ်သွားတယ်ဆရာ”
“မိခင်ဖခင် မကွယ်လွန်မီမှာ သားသမီးတွေကို အမွေခွဲဝေပေးထား ခဲ့ရင်တော့ ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့။ ဒါ ပေမယ့် ကွယ်လွန်သွားသည့်တိုင် အမွေခွဲဝေခံစားခြင်းမရှိသေးရင် တော့ မိခင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဖခင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ခင်ပွန်း၊ ဇနီးကွယ်လွန်လို့ နောက်အိမ် ထောင်ပြုခဲ့ရင် သားသမီးတွေက မိမိ ရဲ့ ဝေစုကို တောင်းဆိုခွင့်ရှိမှာဖြစ် တယ်”
နောက်အိမ်ထောင်ပြုထားသော မိရင်းဖရင်းနှင့် သားသမီးများ အမွေမခွဲရသေးသော အိမ်နှင့် မြေကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
“ကားအက်ဆီးဒင့်နဲ့ ကွယ်လွန် သွားတယ်။ သူ့ယောကျ်ားကတော့ ကျန်ခဲ့တယ်။ ဒါဆို ဝယ်သူက ဘယ် လိုဖြစ်နိုင်သလဲ ဆရာ”
“ဥပဒေအရ စဉ်းစားကြည့်ရမှာ ပေါ့”
“မယားသေရင်လင်က ခံစားခွင့် ရှိတယ်ဆိုတော့ နောက်အိမ်ထောင် ခင်ပွန်းက ခံစားခွင့်အားလုံးရသွားပါ သလား”
BOT စနစ်ဖြင့် အဆောက်အဦးဆောက်လုပ်ရန် မြေငှားရမ်းမည်ဆိုလျှင်
မြေငှားရမ်းကာလ ၅ဝနှစ်ဖြစ်ပြီး အဆောက်အအုံဆောက်မယ်ဆိုပါစို့။ လက်ရှိကာလမှာ အဆင့်မြင့်တိုက်တွေ ဆောက်ပြီးတိုက် ခန်းတွေရဲ့ အကျိုးအမြတ်ဖြစ်တဲ့ ရောင်းချလွှဲပြောင်းခြင်းကိစ္စတွေကို မြေငှားယူသူက ခံစားခွင့်ရှိမှာဖြစ်တယ်။ ငှားရမ်းကာလပြည့်သွားရင် တော့ အငှားချထားသူ မြေရှင်ကို အဆောက်အအုံအပါအဝင် အဆောက်အအုံနှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက် နေသော ပစ္စည်းအားလုံးကို ကောင်း မွန်စွာပုံမှန်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ အခြေအ နေအတိုင်း အဖိုးစားနားမဲ့ လွှဲပြောင်း ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်”
အရောင်းအဝယ် စာချုပ်များတွင် ဖော်ပြသော ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာရသူနှင့် တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုသည်မှာ
ဥပဒေနဲ့အညီ မိမိကိုယ်စားဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ပေး ထားတဲ့ ကိုယ်စား လှယ်လွှဲစာရသူကို ခေါ်ပါတယ်။ ရှင်းအောင်ပြောရရင် လူအများသုံးစွဲပြောဆိုနေကြတဲ့ G.P အထွေထွေကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ၊ S.P အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာနဲ့ ပေးအပ် လွှဲထားခြင်းဖြစ်တယ်”
“ဒါဆိုရင် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာရသူဆိုတာက ကိုယ်စားလှယ်စာလွှဲ အပ်သူ အသက် ထင်ရှားရှိနေစဉ်မှာပဲ သူ့ကိုယ်စားဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသူဖြစ်တယ်။ တရားဝင် ကိုယ်စား လှယ်ကတော့ ကွယ်လွန်သွားသူ ကိုယ်စားဥပဒေအရ ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိတဲ့သူ လို့ ခေါ်မှာပေါ့နော်”
ယုံကြည်မှု ပိုမိုရလာမည့် အိမ်ခြံမြေ ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများနှင့် ဥပဒေ
“လိုင်စင်ရရှိထားသူသည် လိမ် လည်မှု တစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန် ကြောင်း တရားရုံးက ပြစ်ဒဏ်ချမှတ် ခြင်း ခံရပါက လိုင်စင်ရုပ်သိမ်းခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်”
“လိုင်စင်မရှိဘဲဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရင် အပြစ်ဒဏ်ပေးနိုင်ပါ သလား”“ လုပ်ငန်းလိုင်စင်မရှိဘဲ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားရင် ထိုသူကို ခြောက်လ အထိ ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ကျပ်သိန်း ၃ဝ အထိ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ် ရပ်စလုံးဖြစ်စေ၊ ချမှတ်ရမယ်လို့ ဥပဒေကြမ်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်”
ကုမ္ပဏီပိုင် မြေနှင့်အိမ် ကိုဝယ်မည်ဆိုလျှင်
ပထမဦးဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံ တင် လက်မှတ်တင်ပြရမယ်။ အဲဒီ မှာ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အမည်စာရင်းပါ မယ်။ အပြောင်းအလဲရှိခဲ့ရင်လည်း ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ရဲ့ အစည်းအ ဝေး မှတ်တမ်းဆုံးဖြတ်ချက်၊ အခု အရောင်းအဝယ်လုပ်ရာမှာ ကုမ္ပဏီ ကိုယ်စား မည်သူ့ကို ခန့်ထားကြောင်း ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ ကုမ္ပဏီပိုင်မြေကွက်ကို ကုမ္ပဏီ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အပါအဝင် ရှယ်ယာ ရှင်တို့က ရောင်းချရန် သဘောတူ ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ချက်စတဲ့ စာရွက် စာတမ်းတွေ ပြည့်စုံအောင်ဆောင် ရွက်ထားဖို့ လိုပါတယ်”
“အရောင်းအဝယ်စာချုပ် ချုပ် ရင် အဲဒီစာရွက်စာတမ်းတ�